That's so good, right?: May 2011
ကျွန်တော် နံရံတစ်ခု အုတ်နံရံတစ်ချပ်ကိုမှီပြီးရပ်နေပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ၅၉လမ်း ဘူတာရဲ့ တစ်ခုသော နံရံမှာပါ။ အမှတ်(၁) ရထားကိုစောင့်နေခြင်းလေ။ ပူနွေးနေတဲ့ စနေနေ့ တစ်မနက်ခင်းလုံး မြို့လယ်ပန်းခြံမှာ ပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ရင်း အချိန်ဖြုန်းနေမိခဲ့သေး တာ။ နွေဦးရာသီနေ့ရက်တွေမှာ အေးအေးသက်သာဖြတ်သန်းသွားရမလား ကျွန်တော်ရှေ့ရှုနေပေမဲ့ ဒီမြေအောက်ဘူတာကတော့ ချွေး တွေရွှဲ၊ ကိုယ်နံ့ပြင်းပြင်းတွေရမယ့် ပူပြင်းနွေရာသီနေ့ရက်တွေရဲ့ ရှေ့ပြေးနိမိတ်တစ်ခုအဖြစ် ပိုပေါ်လွင်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်မတ်တပ်ရပ်နေတုန်း လူတစ်ယောက် ပလက်ဖောင်းစီကို လျောက်လှမ်းဆင်းသက်လာတာတွေ့ရပါရဲ့။ အရောင်ကျွတ် ဂျင်း ဘောင်းဘီ၊ အနက်ရောင် ဘွတ်ဖိနပ်နှင့်အတူ အညိုရောင်သားရေဂျက်ကက်ကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ အပေါ်ဘက်က ရှပ်အင်္ကျီတစ်ခုခု ကို အောက်ခံဝတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ရင်ဘတ်တစ်ဝက်လောက်ထိ ဟပြီးဝတ်ထားတာဗျ။ အဲဒီလူ တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်နှင့်နီးလာတော့ ကျွန်တော်က သူ့ဖက်ရှင်ကို စူးစမ်းအကြည့်ကြည့်နေသလို သူ့မျက်ဝန်းတွေကလည်း ကျွန်တော့်ဝတ်ဆင်မှုကို အာရုံရောက်နေကြဟန် ပါပဲ။ သူတော်တော်ကြည့်ကောင်းတာ၊ ရင်းနီးကျွမ်းဝင်သူမဟုတ် သူစိမ်း။ ပြီးတော့ အဖြူရုပ်သိပ်မပေါက်ဘဲ ကျွန်တော်တို့လို အာရှသား ရုပ်ရည်ဗျ။
ကျွန်တော့်အသက်က ၂၀ပြည့်လုနီးပါပြီ။ အနက်ရောင်ဆံပင်နှင့်မျက်ဝန်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ အသားအရေဖြူဝင်းပြီး ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေအပြောကတော့ အတော်ချစ်စရာကောင်းပါသတဲ့။ ဒီလူ့မျက်ဝန်းတွေက အညိုရောင်ဖြစ်ပြီး ကြည်လင်တောက်ပနေတာ။ ကျွန်တော် အညိုရောင်မျက်ဝန်းတွေကိုမြင်ဖူးပေမဲ့ သူ့မျက်လုံးလို ကြည်လင်ပြီး အရည်လဲ့နေတာမျိုးကိုမမြင်ဖူးပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အသွင်အပြင်က တူညီနေသလားပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ထက်စာရင် ကပိုကရိုဆန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဆံနွယ်တွေက လှိုင်းထနေပြီး သူ့ဆံပင်ကတော့ ဖြောင့်စင်းနေတာ။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကလည်း ထူးခြားတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုဝင်တွေက ညှို့ငှင်နေသလိုပဲလို့ မကြာခဏမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဆို ကျွန်တော့်ဆံနွယ်တွေကို သဘောအရမ်းကျကြတာ။ ကျွန်တော့်အသားအရေက ဖြူဝင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ အာရှသားမြန်မာဆိုတော့ အရောင် ပါတဲ့ဖြူဝင်းမှုပေါ့။ ဒါကလည်းဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုအသွင်ဆောင်ပါတယ်။
သူစိမ်းက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လမ်းလျှောက်ကာ ကျွန်တော့်ရှေ့ကဖြတ်ပြီး ခုံတန်းတစ်ခုမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပလက်ဖောင်းအစွန်း ကို လျှောက်သွားလိုက်ရင်း ရထားအရိပ်အယောင်ကို အတော်ခပ်လှမ်းလှမ်းထိသွားကြည့်လိုက်တာ ဘာကိုမှမမြင်ရ။ ကျွန်တော်နောက် ပြန်လှည့်ရင်း ဟိုလူရဲ့မျက်ဝန်းတွေစီတစ်ချက်ကြည့်မိတော့ ကျွန်တော်ကြည့်မိတဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုမြန်မြန်လွှဲသွားတာ သိလိုက်ရပါတယ်။
ရထားကြီးကတော့ လှိမ့်ပြီးဝင်လာတာ ကျွန်တော်တက်လိုက်ကာ စီးနှင်သူများ ရထားပေါ်က မဆင်းတတ်တဲ့ဘက်က တံခါးနားမှာသွား ရပ်ခဲ့ပါတယ်။ မွန်းတည့်ဖို့စောသေးတဲ့အချိန်မှာ အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင် ပြည့်နှက်နေတာ ဒီအချိန်မှာ။ ရထားထဲဝင်သွားချိန်မှာ တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ပါပဲ။ အရှိန်မြင့်မြင့်မဟုတ်ပေမဲ့ မြန်မြန်လေးမောင်းတာကြောင့် ခပ်ဝေးဝေး မကြည့်ဖြစ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်စီးနှင်လာတဲ့နေရာ ၀န်းကျင်ကိုအကြည့်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ခပ်ချောချောသူစိမ်းကိုမတွေ့ရတော့....သွားပါပြီဗျာ။
၅၅လမ်းမှာ ရထားရပ်တော့ လူအုပ်အလုံးအရင်းလိုက်ဆင်းသွားကြတယ်လေ။ အခုမှရှုပ်ထွေးနေတဲ့မြင်ကွင်း လင်းသွားတာမှာ ကျွန်တော့် ရဲ့ညာဘက် တစ်တန်းတည်းမှာ ခဏနေကလူ ထိုင်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတာပေါ့။ နေကာမျက်မှန်ခပ်ကြီးကြီးကို ကျွန်တော်တပ်ထားလိုက်တာ ကြောင့် သူ့ကိုသေချာရှိုးနေတာ မသိနိုင်တော့ပါ။ ခြေဖျားစီကြည့်တော့ အကောင်းစားအားကစားဘွတ်ဖိနပ်၊ ပေါင်စီမှာတော့ Levis' ဘောင်းဘီ။ နောက်ဆုံး တင်ပါးအစုံကိုအကြည့်ရောက်တော့ အခြားနေရာတွေကို မျက်စိမရွှေ့နိုင်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒီလူနဲ့ရင်ခုန် စရာ ကစားပွဲတစ်ခုဆင်နွှဲဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်နေရလားဆိုပြီး ပြဿနာရှာလို့မရပါဘူးလေ။ ရှေ့တည့်တည့်ကိုပဲ အာရုံစိုက်နေတယ်လို့ ထင်မှာပါ။
ကျွန်တော့်နားသယ်စပ်က ဆံနွယ်တွေကို ခါသလိုလိုနဲ့ ဦးခေါင်းဘေးဘက်ကို လက်အသာမြှောက်လိုက်ပါတယ်။ လက်ချောင်းတွေဖော် ထားတဲ့ သားရေလက်အိတ်က သန်မာတဲ့ ကျွန်တော့်လက်အစုံမှာရှိနေပါရဲ့။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေဟာ နားထင်စပ်က မျက်မှန် ကိုင်းတစ်ဖက်စီကိုအရောက်သွားပြီး မျက်မှန်ကိုစတိုင်လ်ပါပါချွတ်လိုက်ပါတယ်။ စပ်ဖြဲဖြဲအကြည့်မျိုးနှင့် အဲဒီလူ စီကြည့်နေလိုက်ပါရဲ့။
အဲဒီလူကလည်း တုန့်ပြန်မှုနှစ်ခုနှင့်တန်ပြန်ပါတယ်။ ဘယ်တစ်ခုက ပိုအရေးပါမှန်း မသေချာပါဘူး။ သူရုတ်တရက်လိုပဲ ကျွန်တော့် မျက်ဝန်းမှာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ မျက်ဝန်းလဲ့ပြာပြာမှာ အာရုံငြိသွားခြင်း။ ကျွန်တော် သူ့မျက်ဝန်းတွေကို အဓိပ္ပာယ်ဖော်ကြည့်တော့ နိုင်လိုမင်းထက်အရိပ်အယောင်တွေတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလူ ကျွန်တော့်ကို တမင်ကြောက်လန့်သွားအောင် ဇာတ်လမ်း မဆက်ဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်းလား? သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက မထီတရိအပြုံးမျိုးနှင့် သွားဖြူဖြူဖွေးဖွေးတွေကို ဖော်ပြပါတယ်။ လှမ်းနှုတ်ဆက်ဟန်အပေါ်မြှောက် မိတဲ့လက်ကို မြေပြင်စီပြန်ညွှန်ပြလိုက်ပြီး စပ်ဖြဲဖြဲမျက်နှာကိုလည်း ပြန်တည်လိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ နေကာမျက်မှန်ကို အသာပြန် တပ်လိုက်တာပေါ့။ စေ့စေ့ငုငုကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီလူရဲ့ လက်ထဲမှာ ကဒ်တွေကိုင်ထားတာကို သတိထားမိပါတယ်။ ရထားက ၄၂လမ်း လည်းဆိုက်ရော သူမတ်တပ်ရပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အရပ်အမြင့်က သိပ်မကွာ အတူတူလောက်ပဲ။ သူရပ်ဖို့ အသေအချာမဖြစ်ခင် မှာပဲ ရထားက ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်တာကြောင့် ဟန်ချက်ပျက်ကာ ကျွန်တော့်စီ ပြေးဝင်လာတော့တာဗျ။
'ဟေး...ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ' ကျွန်တော်သူ့ပခုံးကိုထိန်းကိုင်ထားလိုက်ရင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
'မင်းလက်တွေ ငါ့ပခုံးပေါ်ကဖယ်လိုက်စမ်း' မာန်ဖီတဲ့အတိုင်းအော်တယ်လေ သူက။ ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်မိကာ ခေါင်းအသာရမ်းမိပါ တယ်။
ကျွန်တော် သူ့ဘက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး 'ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ကိုပြောနေတာလား' မေးမိပါတယ်။
'ဟုတ်တယ် ,အခုမင်းခြေလှမ်းတွေကို ရှေ့ကနေ ခပ်မှန်မှန်တစ်လှမ်းခြင်းလျှောက်စမ်းပါ'
လူတွေက အဲဒီလူရဲ့ လက်သီးဆုပ်နှင့် ကျွန်တော့်ကို ရထားအဆင်းတံခါးစီ တွန်းထုတ်နေတာတို့ကို ကြည့်နေကြပါတယ်။ အလုပ်များလှ တဲ့ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကို နည်းနည်းသတိပြုမိပြီး၊ အဲဒါကိုက New York ဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။ အနည်းငယ်သော လူတွေကသာ သူတို့မြင်ခဲ့ရမှုအပေါ် ဂရုစိုက်မှာ။
'ခင်ဗျားသိလား, စီစီတီဗီ ကင်မရာတွေမှာ ခင်ဗျားပုံရိပ်ပေါ်လို့ကတော့ ရထားရဲတွေလာပြီး ဖမ်းမှာနော်'
'မင်းသဘောပဲ။ လမ်းသာဆက်လျှောက်' သူအံကြိတ်သံနဲ့သတိပေးတယ်။ ကျွန်တော့်နောက်ဖက်ကနေ အတော်ကပ်ပြီး လိုက်လာတာ က ဘေးကနေကြည့်ရင် ရှေ့ကလူက လမ်းပိတ်နေလို့ နောက်ဘက်ကလူဆင်းဖို့မလွယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံပါ။ ကျွန်တော်တို့ပလက်ဖောင်း တလျှောက် လမ်းလျှောက်လာရင်းမှ ကျွန်တော့်ပခုံးကို ခပ်တင်းတင်း လှမ်းတင်လိုက်တာကို ခံစားရချိန်မှာ ရပ်တန့်လိုက်မိပါတယ်။
'လှည့် ငါပြောနေတယ်' သူကျွန်တော့်ကို ကြိမ်းဝါးသလိုပြောပြီး သူ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ တံခါးတစ်ချပ်ဖက်ကို အားနှင့်တွန်းကာ သွားစေပါ တယ်။ အတွင်းဘက်ကိုရောက်တော့ စင်္ကြလမ်းတိုတစ်ခု၊ နောက်ပြီး အခြားသောတံခါးတစ်ချပ်။ သန်မာတဲ့ သူ့ခြေတစ်ဖက်နှင့် တံခါးကို ကန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတာက ရှည်လျားလှတဲ့ သတ္ထုလှေကားတစ်စင်းကိုပါ။
မိုးချိန်းသံကြောင့် တုန်ခါသွားရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးခုန်သံနည်းတူစတင် အလှုပ်ကြမ်းလာပါပြီ။ ကျွန်တော့်လက်တွေကို တံခါးဘောင်ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်စေပြီး ရှေ့ဆက်မသွားဘဲတွေဝေနေမိပါတယ်။
'ဆက်ရွှေ့လေကွာ' ထပ်ပြီး အမိန့်ပေးရဲ့။
'ခင်ဗျား ရူးနေပြီလား? ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ'
ကျွန်တော့်ပခုံးတွေကို သူ့လက်အစုံနှင့် တွန်းပြီးလှေကားထစ်တွေစီဆင်းဖို့တွန်းအားပေးပါတယ်။
'C'mon man, ဘယ်နေရာသွားမှာလဲ? ကျွန်တော်တို့ အဲဒီအကြောင်း ပြောကြရအောင်လား'
'မင်း ငါ့ကိုစိတ်ရှုပ်လာအောင် မလုပ်သင့်ဘူးနော်'
'ဘာကိုလုပ်လို့....' အမေးသာထုတ်နေမိပေမဲ့ New York ရဲ့အတွင်းကျဆုံးအပိုင်းစီ ပိုပိုပြီး နက်ရှိုင်းမှုကို ကြည့်လာရပါပြီ။
'ကျွန်တော်အပျော်သဘောမျိုးလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဘာအဓိပ္ပါယ်နဲ့မှ မသက်ဆိုင်ပါဘူးဗျာ'
'အတော်နောက်ကျသွားပြီ' သူ့စကားကိုအဆင်ပြေပြေမပြောတတ်ဘူးလားမသိ။ 'ဆက်ရွှေ့'
'Aww...fuck' ကျွန်တော်တို့ မြေပြင်ကိုထိပြီး ရပ်တန့်ချိန်မှာ နှုတ်ကထွက်သွားမိပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်မိတော့ မိုင်းတွင်းတစ်ခု ထဲရောက်နေတဲ့အတိုင်းမြင်ရပါရဲ့။ သစ်သားငြမ်းစင်များ၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ကျောက်ဆောင်နဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေ။ ကြည့်ရတာ သိပ်မကောင်းဘူး။
'မင်းလက်တွေကိုနောက်ပြန်ချိတ်ထားပြီး ရှေ့က နံရံစီရွှေ့'
'ဟူး....' ကျွန်တော့်မျက်စိထဲမြင်ရတာတွေကြောင့် သူ့ကိုပြန် ဂျစ်တိုက်မိပါတယ်။
'ခင်ဗျား တကယ်ရူးနေလား? ဘယ်မလဲနံရံ? အားလုံးကျောက်ဆောင်တွေချည်းပဲ'
အဲဒီတော့လည်း ဘာမှထပ်မပြောဘဲ 'လျှောက်မှာသာလျှောက် လမ်းကို' လူကိုတွန်းလွှတ်ပါတယ်။
'ကျွတ်..ခင်ဗျားမှာသေနတ်ပါတယ်?' လည်ချောင်းထဲ တစ်ဆို့သွားတဲ့လေသံနှင့် ကျွန်တော်မေးမိပါလေ့။
ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေကို ခပ်ဖြေးဖြေးတစ်လှမ်းခြင်းရွှေ့သွားလိုက်တော့ နောက်ဖက်က ခြေသံခပ်စိပ်စိပ်နှင့် လိုက်လာသံကိုကြားရပါ တယ်။ ဘာတွေဖြစ်မလဲ နောက်ကိုပြန်လှည့်မကြည့်နိုင်စဉ်မှာပဲ ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ်က လက်တစ်ဖက်က နောက်ဘက်ပြန်လှည့်စေတာ ခံစားလိုက်ရရော။ ပြီးတော့ သစ်သားငြမ်းစင်တွေဖက် နောက်ပြန်ကပ်သွားအောင်လုပ်ပါ၏။
'ဘာလဲဗျ....ခင်ဗျား....' ကျွန်တော့်ပြောစကား တစ်ဝက်တစ်ပျက်နှင့်အတူ ရပ်ကာ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ပူးကပ်သွားရပါတယ်။ သူ့ပါးစပ်ဟာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းအစုံအပေါ် ငတ်မွတ်စွာ...။
သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းများကို ထိန်းကိုင်ထားတာဗျ နှုတ်ခမ်းသားတွေ လျှာတွေမွှေနေစဉ်မှာပေါ့။ စိုစွတ်၊ ဆာလောင် မွတ်သိပ်တဲ့အနမ်းများ၊ အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်သံခပ်ပြင်းပြင်းများဖြင့် နှစ်ဦးသားကိုယ်ခန္ဓာတွေက ပူးကပ်စွာ။ ကျွန်တော် တိမ်တိုက် တွေပေါ် အမြင့်ဆုံးဝဲပျံနေပါပြီ။ 'အန္တရာယ်' ကစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းသားပါ။ သူလည်း ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေပုံပါပဲ။ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာကို ပိုမိုနီးကပ်စေဖို့ ကျွန်တော် လက်မောင်းတွေနှင့်ပါ ဖက်တွယ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီလူကြမ်းလေးရဲ့ ဂျက်ကက်ကိုဖွင့်ဟကာ သူ့ရဲ့ခပ်မို့မို့ရင်အုပ်တွေကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာဘက်ကို ကျွန်တော်ယိမ်းယိုင်လိုက်ရင်း သူ့ညှပ်ရိုးတွေကို လျှာဖျားလေးနှင့်လျက်ပြုမိပါရဲ့။ ကျွန်တော်သူ့ရဲ့လည်စိကို နှုတ်ခမ်းအစုံနှင့် ပွတ်သပ် စုပ်ပြုတော့ ခေါင်းကိုမော့ကာ အလိုက်သင့် သူနေပေးတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ခါးအစုံကိုဆွဲကာ ရင်ချင်းအပ်တာမဟုတ် အောက်ပိုင်းခြင်း ပူးကပ်အောင်လုပ်ထားတာ။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့လျှာတွေကို လည်ချောင်းထဲက စုပ်ယူတော့မယ့်အတိုင်း အနမ်းပေးမိပြန်တယ်။ ပြီးတော့လည်း မေးရိုးတလျှောက်နှင့် သူ့နှုတ်ခမ်းတ၀ိုက်ကို နူးနူးညံ့ညံ့နမ်းသလို လျှာနှင့်လည်းပွတ်ဆွဲရော။
'အာ....Fuck yeah' လှိုက်မောသံနှင့် သူညည်းညူတယ်လေ။ ကျွန်တော် သူ့နှုတ်ခမ်းကိုပြင်းပြင်းပျပျပြန်နမ်းနေဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော့် လက်တွေက သူ့ဂျက်ကက်ကိုပိုမိုဖွင့်လှစ်ဖြစ်တာပါ။ သူ့ရှပ်အင်္ကျီတွေဖွင့်တာ ဂျက်ကက်တွေဖယ်တာကို အသာတကြည်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သူ့ရှပ်အင်္ကျီတွေဖွင့်တာ ဂျက်ကက်တွေဖယ်တာကို အသာတကြည်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ခါးအစုံကိုဆွဲကိုင်ထားဆဲဖြင့် နောက် ဖက်ကျောက်ဆိုင်ကိုနောက်ကျောဖြင့် ကပ်မိအောင်လုပ်တာ ကျွန်တော်ဖြင့် အသက်ကိုအငမ်းမရစုပ်မျိုမိပါ၏။
'ကြိုက်တယ်....စကားမစပ်...ခင်ဗျားဆန္ဒရှိရင် အဲဒါတွေ ကျွန်တော့်ကိုပေး' ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဖျက်ကနဲဖြစ်ကာ ပြန်ပြောမိပါတယ်။
သူ့လက်တစ်ဖက်ကို လွှတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်အပေါ်ဝတ်အင်္ကျီကို ဖွင့်လှစ်နေစဉ်မှာ ကျွန်တော့်လက်တွေက သူ့ပေါင်ခြံနှင့် ဖောင်းဖုနေ တဲ့ခွဆုံတို့ကိုပွတ်သပ်လက်လျှိုလိုက်တာပေါ့။ ဂျင်းဘောင်းဘီသားကို တွန်းကန်နေတဲ့ သူ့ငပဲရဲ့မာတောင့်မှုကို ခံစားမိပါတယ်။ ညင်ညင် သာသာ ဖျစ်ညှစ်ပေးမိတော့ သူ့နှုတ်ခမ်းက ညည်းတွားသံသဲ့သဲ့ပြုကာ မာတောင့်တဲ့သူ့ငပဲနှင့် ကျွန်တော့်လက်အစုံကို ပိုမိထိကပ်စေ ပါရဲ့။
သူကလည်း အားကျမခံ ကျွန်တော့်ဂျင်းဘောင်းဘီက ကြယ်သီးတွေကို ဖွင့်ပြီးဆွဲလိုက်တာ ခဏခြင်းမှာ ဘောင်းဘီက ခါးမှလျောကနဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့လက်နဲ့ကိုင်ပြီးကြည့်တာ ရှက်သလိုဖြစ်တာကြောင့် သူ့ခါးကို ကျွန်တော့်လက်နှင့်ဆွဲပြီး ငပဲခြင်းဖိကပ်ထားလိုက် ပါတယ်။
'ကျွန်တော်တို့ အဖမ်းခံရရင် ဘယ်လို?'
'စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း အပိုင်ကဏ္ဍပေါ့၊ စွန့်စားလိုက်စမ်းပါကွာ' အသက်ကိုပုံမှန်ရှူရင်း သူကပြောသေးတာ။
'ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုဇာတ်လမ်းခင်းနေကြလို့ အဖမ်းခံရလိမ့်မယ်'
'မင်းစခဲ့တာကို အဆုံးသတ်မှာလား ဒါမှမဟုတ်...'
'ငါ့သေနတ်ကိုဆွဲထုတ်မိပြီး မင်းကို အဆုံးသတ်ပေးမိမယ်'
'ကျွန်တော့်ကို သတ်မှာပေါ့၊ ဒီလိုလား?'
'ငါ အခုတော့ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး..စကားသောက်ရမ်းများတယ် ငါ့-ီးတောင်တာပျော့သွားပြီ'
ကျွန်တော်လည်း သူ့ဘောင်းဘီကိုခပ်မြန်မြန်ဆွဲဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားခန္ဓာကိုယ်မှာ အဖြူရောင်အတွင်းခံ ကိုယ်စီကလွဲလို့ သိသာတာက ငပဲနှစ်ခုရဲ့အမြှောင်းကြီးတွေ။
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို သူစိုက်ကြည့်ငေးမောရင်း သူ့ငပဲဟာတဖြည်းဖြည်းပြန်မာလာပါတယ်။ မျက်ဝန်းအကြည့်ကိုယ်စီငြိပြီးနောက် အနမ်းတွေပြန်လည်လှုပ်ရှားမိကြတာပေါ့။ နှစ်ဦးသားလုံးလုံးထွေးထွေးလှုပ်ရှားမိတာ ကျွန်တော့်နဖူးနဲ့ သစ်သားဘောင်တန်းတစ်ခု ရိုက်ခတ်မိပါရော။
'မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ' သူက မကျေမနပ်မေးသား။ 'လာစမ်းပါဗျာ' ကြက်ခြေခတ် ယက်မတန်းနှစ်ခုရှိတဲ့အပေါ် ခြေထောက်တွေ လွှဲပြီး တင်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားရဲ့။ သူ့ပေါင်ခြံဟာ ကျွန်တော့်မျက်နှာနှင့် တည့်တည့်ဖြစ်သလို သူ့မျက်နှာဖက်မှာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆံ vice versa.
'ခင်ဗျား ဒီနည်းလမ်းကိုကြိုက်မယ်ထင်တယ်' သူခပ်တိုးတိုး သဘောတကျရယ်လိုက်သံဟာ သူ့ငပဲကိုဆွဲထုတ် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ နှင့်အနားသတ်လိုက်ချိန်မှာပေါ်ထွက်လာတယ်။ သူလည်း ကျွန်တော့်အတွင်းခံပါးပါးပေါ်က တစ်ဆင့်ကျွန်တော့်ငပဲကို နှုတ်ခမ်းတွေနှင့် ပွတ်ဆွဲရဲ့။
ခဏတော့ ညည်းတွားလိုက်မိပေမယ့် သူ့ရဲ့ငပဲကွမ်းသီးခေါင်းတစ်ဝိုက်ကိုလျှာဖြင့် ပြေးလွှားကစားဖြစ်ပါ၏။ ပြီးမှ ကွမ်းသီးခေါင်းကို ခပ်ဖွဖွ နှင့် တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်တယ်။
'ရပ်...ရပ်...ရပ်ငါ့ကောင် ပြီးအောင်မလုပ်သေးနဲ့၊ ငါမပြီးချင်သေးဘူး' အခုလိုကြတော့ အလန့်တကြားသူတားရောလေ။
ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို -ုပ်မှုတ်တာရပ်လိုက်တော့ သူ့နှုတ်ခမ်းများဟာ ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်နားအနီးကပ်လျှာလေးပြူတစ်ပြူတစ်နဲ့ ကွမ်းသီး ခေါင်းကိုလျက်ပြုပြီး ထိပ်ပိုင်းတစ်ခုလုံး ပါးစပ်ထဲသွင်းလိုက်ပါတယ်။ မျက်လုံးတွေကို မှိတ် သူ့ပြုစုမှုရဲ့ အထိအတွေ့များကို ခံစားလိုက်ရ ပါရော။ ကြိုတင်မစီစဉ် မချိန်းဆိုပဲ ခုလိုမတော်တဆအဖြစ်ဇာတ်လမ်း တစ်ခါမှ မကြုံဖူးခဲ့ပေမဲ့ အခုဟာက ဖီးလ်ကောင်းသားပါ။ ခပ်ကုန်း ကုန်းဖြစ်သွားတဲ့ သူ့တင်ပါးကို ကျွန်တော့်လက်နှင့်ပြန်ဆွဲယူပြီး လုံးဝန်းတဲ့ရွှေဥတွေို့ လျာနှင့်လျက်ရင်း တစ်လုံးခြင်းငုံစုပ်လိုက်ပါတယ်။ သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီဟာ ခြေချင်းဝတ်မှာရှိနေဆဲဆိုတော့ သူ့ခြေထောက်တွေကောင်းကောင်းမမြှောက်နိုင်ပါ။
'ခင်ဗျားခြေထောက်တွေကို ဂျင်းဘောင်းဘီထဲကနေ ထုတ်လိုက်စမ်းပါဗျာ'
ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ကနေ မချွတ်ဘဲရှိနေတော့ ကျွန်တော်သူ့ခြေထောက်ကိုဆွဲကိုင် ဘွတ်ဘိနပ်ရော ဂျင်းဘောင်းဘီကိုရော ဖယ်ရှားပစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ခြေထောက်ကို ကားစေလိုက်ပြီး မလိုင်လုံးတွေလို လုံးဝန်းတဲ့အရာကို လျှာတွေအာတွေဖြင့် ပြန် ပြုစုတော့ သူ့ပါးစပ်က ညည်းတွားသံထွက်လာရင်း ဟန်ချက်ပျက်သွားပါရဲ့။
'မင်းအိုကေရဲ့လား? ဒီအနေအထားနဲ့ တင်ကိုကြွလိုက်ချလိုက်လုပ်ရတာ' ကျွန်တော့်မျက်နှာကို သူ့ငပဲဘက်ပြန်ပြီးမူလိုက်ကာ လက် နှင့်လှမ်းကိုင်ရင်း အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
'အခုခင်ဗျားက ကျွန်တော်လုပ်လို့အဆင်ပြေမပြေ စိုးရိမ်နေတာလား'
'Fuck you" ရယ်ရသားပဲ သူ့စိတ်ရင်းပေါ်မှာတော့စိုးရိမ်သား။
'ခင်ဗျားလုပ်ချင်ရင်ပေါ့' သူ့ကိုအဖြေပေးလိုက်ရင်း ရှည်လျားတဲ့ သူ့ငပဲကိုကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းက တစ်ဆင့်အာခေါင်ထဲထိသွားကာ သူ့ ဆီးစပ်ကခြုံပုတ်ငယ်ကျွန်တော့်နှာခေါင်းတွေနှင့်ထိစေလိုက်ပါတယ်။
'ဟူး....' သက်ပြင်းငွေ့ငွေ့ သူချရဲ့။
'ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ကို -ိုးချင်နေတာလား'
'မင်းငါနဲ့ မကစားချင်စမ်းနဲ့' သူပျက်ရယ်ပြုတယ်အဲဒီစကားကို။
'လာစမ်းပါ ဗလကြီးရာ ကျွန်တော့်ကို ခင်ဗျားမလိုအပ်ဘူးလား? Take me, ဘယ်နေရာကို ခင်ဗျားလိုချင်လဲ ခင်ဗျားသဘောအတိုင်း ရမယ်လေ ဘာအတွက်စောင့်နေတာလဲဗျာ' ခပ်တိုးတိုးညှို့မြူတဲ့အသံနှင့် ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထား ပြင်လိုက်ပြီး သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲယူလိုက်တာ ကျွန်တော့်စီကိုပေါ့။ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ပေါင်ကြားက ငပဲမာမာတွေ မီးပွင့်ကုန်သလားပဲ။ ဒီတစ်ခါတော့ သူ့နှုတ်ခမ်းအပြည့်ဖြင့် ကျွန်တော့်ကိုတက်မက်စွာနမ်းတယ်။ သူ့ငပဲကတော့ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံမှာ ပွတ်သပ်နေတာ အရည်ကြည်တချို့အမျှင်တန်းပါပြီ။
'Um hum' ကျွန်တော်ခပ်ကြမ်းကြမ်းကျောက်သားတွေပေါ် ကျောမှီရင်းအဖြေပေးမိရဲ့။ ပြီးတော့မြင်လိုက်ရတာက ညစ်ပေတဲ့သူ့ လက်အစုံက ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ပွတ်သပ်ကာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကို သူကြည့်တယ်။
'ခင်ဗျားကို' ကျွန်တော်ဖြေနိုင်တာက အဲဒါပဲလေ။ 'ခင်ဗျားကိုလိုချင်နေတာ'
'I want you to fuck me' ကျွန်တော်မရှက်တော့ပါဘူး။ 'အခုပဲ -ိုးပေးဗျာ ကျွန်တော့်ကို'
သူကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာဖြင့် ကျွန်တော့်တင်ပါးအကွဲကြောင်းထဲ ငပဲထိပ်ပိုင်းကိုသွင်းတယ်။
'C'mon ...ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းအောင် ခင်ဗျားလုပ်နိုင်ပါတယ်' ကျွန်တော် သူ့ကိုဒီထက်ပိုပြီးလုပ်စေချင်သေးတာဗျ။ သူက ထိပ်ပိုင်းလေး ပဲဝင်အောင်ထည့်ရင်း ငြိမ်နေတာကိုး။
ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကို သူ့လက်နှင့်ကိုင်ပြီး အသာဟကာ သူ့ခါးကိုကော့ရင်း ရှည်လျားမတ်ထောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို တဖြည်းဖြည်းဖိ သွင်းလိုက်ပါတယ် ခဏအကြာမှာ။ ရင်ထဲမှာ နင့်ကနဲနေသွားတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေမှိတ်ကာ ငြိမ်သွားမိသေးတာပေါ့။ ပူနွေးတဲ့ သူ့ငပဲကြီးတစ်စစတိုးဝင်သွားတာ သိပ်မနာတာကြောင့် ခံစားရတာကောင်းတာ။ 'ကျွတ်' အဆုံးထိသွင်းထားရင်း နှဲ့နေတာ ကျွန်တော့် စိတ်တွေကို မရိုးမရွပိုဖြစ်စေပါတယ်။
'ငါမင်းမျက်လုံးလှလှကို ပိုပြီးငေးကြည့်မိခဲ့ယုံပါ။ အခုတော့ ခံစားမှုစွက်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေကိုပဲ ကြည့်နေချင်တော့တာပဲ' သူ့အသံက နူးညံ့ငြင်သာနေသလို သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ကို ဖြည်းဖြည်းသက်သာပွတ်သပ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော့်ခရေတွင်းထဲ သူ့ငပဲကိုအဆုံးထိဖိသွင်း နှုတ်ခမ်းတွေကို ခပ်ဖွဖွကိုက်လိုက်ကာ 'ငါ ငေါ့တာတို့ သရော်တာတို့ကို မကြိုက်ဘူး' တဲ့ပြော၏။
'ကျွန်တော်လှောင်တာ သရော်တာမျိုး မဟုတ်ဘူးလေသဘောက' ကျွန်တော်ပင့်သက်ရှိုက်မိပါရဲ့။
'ဘော်ဒါ အလုပ်သိပ်မဖြစ်သေးဘူး။ ကျွန်တော်နေနေရတဲ့ အနေအထားက ကို့ရို့ကားယားနဲ့ ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်'
'ဟေ့လူ ကျွန်တော့်လက်နဲ့ဆွဲကိုင်ထားဖို့ ဘာမှမရှိဘူး ဟင်းလင်းပြင်ကြီး'
သူကျွန်တော့်ဦးခေါင်းရဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းကိုကျော်ကြည့်လိုက်ရင်း အဆင်ပြေပြေလှဲလို့ရမယ့် ကျောက်သားပြင်ကိုမြင်လို့ လက်ညှိုးထိုးကာ 'ဟိုနေရာမှာ' ပြောလည်းပြော ရှည်လျားလှတဲ့ သူ့ငပဲကိုအသာဆွဲထုတ်တာလေ ရင်ထဲဟာဆင်းသွားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား မြင်လိုက်ရတဲ့ကျောက်သားပြင်ကိုသွားပြီးနောက် ဆင်ခြေလျောလေးပေါ်မှာ ကျွန်တော် တစ်ဝက်လှဲ တစ်ဝက် ထိုင်အနေအထားလေးလိုလှဲလျောင်းလိုက်ပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ရဲ့ခပ်စွင့်စွင့်တင်ပါးတွေရှိရာဘက်ပိုင်းမှာ နေရာယူလိုက်ပြီးမှ ငြိမ် သက်ကာ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်နေတယ်။
'ဒီကိစ္စက မင်းမျှော်လင့်နေခဲ့တဲ့အရာလား' သူခပ်တိုးတိုးမေးပြန်ရော။
နှုတ်ခမ်းအစုံက စပ်ဖြဲဖြဲအပြုံးထပ်ပေါ်လာပြီး 'အားလုံး နှင့် ပိုပြီးခပ်ကြမ်းကြမ်း' 'Fuck me' လို့ ကျွန်တော်လှိုက်မောတုန်ယင်စွာတောင်း ဆိုရင်း သူ့ရဲ့ မွတ်သိပ်ကြမ်းတမ်းမှုကိုတောင့်တမိပါတယ်။
ကျွန်တော့်ခြေချင်းဝတ်တွေကို သူဆွဲကိုင်ရင်း ကျွန်တော့်မျက်နှာစီ ငုံ့ကိုင်းကာ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ငြင်ငြင်သာသာနမ်းပါ၏။ အရိုင်းဆန် တဲ့ တက်မက်မှုအရသာတွေကို သူနှစ်သက်သွားကြောင်း အနမ်းတွေက သက်သေထူနေပါပြီ။ ပူနွေးဆဲ သူ့ငပဲမှာ ဒီတစ်ခါတော့ ရာဘာ အစွပ်စွပ်လိုက်ဟန်တူတယ် အမွှေးခပ်အုပ်အုပ်နှင့် ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေ ဖိကပ်သွားမှ နည်းနည်းနာတယ်။ သူ့အကြည့်ကတော့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းကနေ မလွှဲပါဘူး။
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေက ကျေနပ်တဲ့အပြုံးတွေဝေမိကာ 'ခင်ဗျား အိုကေရဲ့လား' မေးမိပါတယ်။ သူက ခေါင်းကိုအသာအယာငြိမ့်ပြပြီး 'ငါတစ်ခါမှ ဒီလိုဖီလင်မျိုး မခံစားရဖူးဘူး' ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ဆံနွယ်တွေကို လက်တစ်ဖက်နှင့် ပွတ်သပ်ကာ လည်တိုင်ကိုနမ်းတယ်ဗျ။
ကျေနပ်ခြင်းတွေ နှစ်သိမ့်မှုတွေက ဘယ်လိုကြောင့် ရင်ထဲဖြစ်ထွန်းလာရတယ် မသိပါဘူး။ သူ့မူအတိုင်း ခပ်ဖြေးဖြေးအဆုံးထိဖိသွင်းပြီး ငြင်သာမှုနှင့် တလှိမ့်လှိမ့် တငြိမ့်ငြိမ့်ဖြင့် လှိုင်းလုံးတစ်ခုထဲမျောပါသွားစေပါတယ်။
'မင်း...အာ...အ...ရှီး ငါ့စိတ်တွေပေါက်ကွဲသွားတော့မလားပဲ' သူကျွန်တော့်နားကိုကပ်ပြီး တိုးတိုးလေးညည်းတွားတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့နားရွက်တွေကို လျှာနဲ့သရပ်ပြီး နားရွက်ဖျားလေးကို သွားနှင့်ကိုက်တာ...။
'ကျွန်တော်လည်း အတူတူပဲ....' ကျွန်တော့်ပါးစပ်က အဲဒီစကားလုံးထွက်သွားမိတော့ သူ့မျက်နှာမှာ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ကျေနပ်တဲ့ ရယ်ကျဲကျဲအပြုံးပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော်မနေနိုင်စွာဖြင့် ခပ်ဖူးဖူး သူ့နှုတ်ခမ်းကို လက်ချောင်းလေးတွေဖြင့် လှမ်းပြီးပွတ်သပ်ပြန်တော့ ပါးစပ်အတွင်းထဲသွင်းကာ လျှာဖြင့်ကစားပါရော။
'ဟေ့လူ လုပ်ဗျာ...ခင်ဗျားအရည်တွေ ထုတ်တော့'
'C'mon ...အ....အ ကျွန်တော်အဲဒါကို လိုချင်နေပြီ ပေးဗျာ....အ'
'Umm...ငါ့ငပဲကို မင်းပါးစပ်ထဲထည့်ပြီးမှ ပန်းထုတ်ချင်တာ'
'အဲဒီ့ဖီလင်ပဲ...အဲဒါပဲမဟုတ်လား ခင်ဗျားသုတ်ရည်တွေ...အာ..အ ကျွန်တော့်ကိုပေး'
ကျွန်တော်ခပ်သွက်သွက် ခေါင်းငြိမ့်ပြမိရဲ့။ အရင်ကကြုံဖူးခဲ့ရသလို ခပ်သွက်သွက်ခပ်ကြမ်းကြမ်း မဟုတ်ဘဲ တစိမ့်စိမ့် သူ့ရဲ့ပြုစုချက်များ ဟာလည်း ခံစားချက်ကို ကောင်းကင်ထိရောက်အောင် မြောက်သွားစေပါတယ်။ ခါးလေးကိုနွဲ့ကာနွဲ့ကာ မွှေတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တောင့်တင်းသွားရင်း ပန်းထုတ်မိပါတော့တယ် သုတ်ရည်တွေ။ ဒီအခါမှာတော့ သူက ကျွန်တော့်ပခုံးတွေကို လက်နှစ်ဖက် နှင့်လှမ်းဆွဲကာ အနည်းငယ်မြန်ပြီး အဆုံးထိဖိသွင်းလိုက်ရင်း ပန်းထည့်လိုက်တော့တာ သူ့သုတ်ရည်တွေကိုပေါ့နော်။ ကျွန်တော်လည်း သူနှင့်အတူ အားရပါးရအော်ဟစ်ညည်းတွားရင်း သူလက်ဖျံတွေကို ပြန်လျည်ဖျစ်ညှစ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးအစုံကို သူစိုက် ကြည့်တယ်။ ကြည်လင်ရွှန်းစိုနေတဲ့ မျက်ဝန်းများဟာ တဖြည်းဖြည်း အရည်လဲ့လာရင်းပြုံးယောင်သမ်းလာတယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ထဲ သူမှောက်လှဲငြိမ်သက်ပါတယ် ခဏအကြာမှာတော့။
ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုပြန်လည်ထွေးပွေ့ရင်း 'ကျွန်တော်လည်း ခံစားချက်အတူတူပဲ'
ကျွန်တော်တို့တွေ ဖက်လျက်လှဲလျောင်းကာ ငြိမ်သက်နေမိကြတယ်ပေါ့။
'ငါ ဒီလိုခံစားချက်မျိုး တစ်ခါမှ မခံစားခဲ့ဖူးဘူးကွာ' ရင်ထဲတလှိုက်လှိုက်တက်လာတဲ့အသံနှင့် သူစကားဆိုပါတယ်။
'ခင်ဗျား အရင်က ဒီလိုမဆက်ဆံဖူးပါဘူးနော်? ကျွန်တော်တို့ Public area မှာလုပ်ခဲ့ကြတယ်နဲ့တူတယ်'
' Public နေရာအတိအကျမဟုတ်ပါဘူးကွာ'
'တော်တော်နည်းတဲ့အခွင့်အရေးပါ' သူ့လေသံက မမာထန်တော့။ 'မင်းခေါင်းဘယ်လိုနေသေးလဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးရိုက်မိလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ အဲဒီလိုကြမ်းတမ်းမိဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူး'
'ကျွန်တော် အိုကေပါတယ'် ကျွန်တော်သူ့ဆံနွယ်တွေကို ပွတ်သပ်ရင်းအဖြေပေးမိပါရဲ့။
'ကျွန်တော်တို့ ဘယ်နေရာရောက်နေတာလဲ ရထားဘူတာဝန်းကျင်မှာပဲလား?' ညိုဖျော့ဖျော့သူ့ဆံနွယ်တွေကို ဆက်လက်ကိုင်တွင်ရင်း မေးမိပြန်တယ်။
'Park Ave, ၄၁ နှင့် ၄၂လမ်းကြား'
'ဘယ်လိုများ ဒီနေရာကိုရှာတွေ့ခဲ့တာလဲဗျ' ကျွန်တော်စူးစမ်းမိရော။
စကားပြောရင်းနဲ့ တကယ့်ကို ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို နှစ်ခြိုက်စွာကြည့်နေပြန်သေးတာ။ 'မင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က ဟာတွေကို သန့်ရှင်း ရေးလုပ်ပေးရမလား' ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ အစက 'အခုပဲ ကျွန်တော့်ကိုသေနတ်နဲ့ပစ်လိုက်တော့မလားထင်သေး တာဗျ'
'အခုတော့ ငါ့ကလေးလေးနှင့် မင်းဗိုက်ထဲ သုတ်ရည်တွေပစ်ထည့်လိုက်ပြီ' သူသဘောတကျရယ်မောပါတယ်။ ဟုတ်တော့ဟုတ်သားပါ။
သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အောက်ဖက်အနည်းငယ်လျောလိုက်ကာ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားပေါ်က သုတ်ရည်တွေကို လျာဖျားလေးဖြင့် လျက်ကာ လျက်ကာ သန့်ရှင်းစေပါတယ်။
'ဒီပုံစံအတိုင်း ငါသဘောကျပါတယ်' သူရယ်ရယ်မောမောဖြင့် လက်သီးကိုခပ်လျော့လျော့ဆုပ်ကာ ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုထိုးဟန်ပြု ကြည်စယ်ပါ၏။
'ကျွန်တော်တို့ဘီယာသွားသောက်ရအောင် ဘယ်လိုလဲ?' ကျွန်တော့်အမေးကို သူက အ၀တ်အစားတွေ ပြန်လည်ဝတ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်း 'သိပ်ကောင်းတာပေါ့ အချစ်လေး' တဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်။
'ဒီနေရာလေးက ပေးနေသလားပဲ' သူ့ဘောင်းဘီဇစ်အနားကို လက်နဲ့ထောက်ပြပြီး ကြည်စယ်လိုက်တော့ သူပျာပျာသလဲ ငုံ့ကြည့်ရင်း 'ပေပါဘူး'ဆိုပဲ။ အ၀တ်တွေအကုန်လုံး သေချာသူကြည့်ပြီးမှ ၀တ်တော့တယ် တစ်ကိုယ်လုံး။ အတော်သဘောကျစရာကောင်းတဲ့လူ။ ကျွန်တော်လည်း အ၀တ်တွေကို သေသေသပ်သပ်ဝတ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူ ကျွန်တော့်ကိုဆွဲဖက်ကာ အနမ်းတစ်ခု တမ်းတမ်းတတ ပေးပါတယ်။
'ငါ မင်းအကြောင်းကိုမသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဖို့ဆန္ဒရှိသေးတယ်'
'Yeah, ကျွန်တော်တို့ ရထားစီးတဲ့အခါ တွဲလွတ်တစ်ခုရှာကြံပြီး အလုပ်ဖြစ်ကြတာပေါ့'
'အမ်...ရထားတွဲက ဘာကြောင့် လွတ်နေရာမှာလဲ ဟာ ဟ' သူက ညစ်ကျယ်ကျယ်နှင့်စသေးရဲ့။
'ခင်ဗျားက အန္တရာယ်ပဲ' ကျွန်တော်လည်း သဘောတကျရယ်မောမိပါပြီ။ နှစ်ဦးသားတစ်ယောက်ပခုံးပေါ် တစ်ယောက်လက်တင် အပေါ် ပလက်ဖောင်းရှိရာစီပြန်လျှောက်လာဖြစ်ကြပါတယ်။
နံပါတ်တစ်ရထားဆိုက်ရောက်လာတော့ ကျွန်တော်တို့ရထားပေါ် ရွှင်ရွှင်မြူးမြူး ရယ်မောပျော်ရွှင်စနောက်ရင်း စီးနင်းဖြစ်ကြပါတယ်။ ချစ်ရည်ရွှမ်းတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းကြခြင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရထားကို ၄၂လမ်းကစီးနှင်းပြီး Chirstopher လမ်းမှာဆင်း ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘားတစ်ခုစီဦးတည်ပြီးနောက် မွန်းလွဲချိန် ဘီယာပွဲလေးတစ်ခု ကျင်းပဖြစ်ပါရော။
Alex Aung (26 May 2011)
Posted by Alex Aung at 2:25 PM No comments:
အပေါ်ပိုင်းအ၀တ်ဗလာသူ့ကိုယ်ခန္ဓာ ချွေးတွေရွှဲနစ်နေပါတယ်။ အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းကို အိမ်ရှေ့ခန်းပြတင်းပေါက်ကတစ်ဆင့် ကျွန်တော်ရရှိပိုင်ဆိုင်နေပါရဲ့။ သူနှင့် သူ့ကောင်မလေး လုံးထွေးရစ်ပတ်တာစောင့်ကြည့်နေရသလိုပဲ စိတ်ထဲရင်ခုန်နေမိပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက် ကောင်လေးရဲ့ ခြံဝင်းအရှေ့ပိုင်းတလျှောက်ရွရွပြေးနေကြတာဗျ အခု။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာက သူတို့ပူးပူးကပ်ကပ်ရွရွ ပြေးရင်း ဟိုသည်တို့ထိကစားနေကြတာက ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုတိုးအောင် လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာ။ ဒီမြင်ကွင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ် လောက်ကတည်းက ပုံစံမပြောင်းမြင်နေခဲ့ရတာပါပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်ကောင်လေးရဲ့ အမေ အလစ်ကိုစောင့်နေကြတာဖြစ်မှာ။ ကျွန်တော်သိနေတယ် သူ့ကိုယ်ပိုင်အခန်းလေးမပိုင်ဆိုင်ရသေးတဲ့အချက်ကို ကသိကအောက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ကြောင်းရယ်၊ နွေရာသီ တက္ကသိုလ်ကျောင်းပိတ်ချိန်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကိုပဲမြန်မြန်ကုန်ဆုံးစေချင်နေတယ်ဆိုတာရယ်ပေါ့။ မဆီမဆိုင် တစ်ဖက်ခြံဘက်ကို အာရုံစိုက်နေမိတော့ သူ့အမေပြောခဲ့တဲ့ စကားကိုကြားယောင်မိပါတယ်။များသောအားဖြင့် အိမ်မှာ သူမရဲ့သားက ရှိမနေတတ်တော့ ကျွန်တော်ကသာ ဂရုတစိုက်ပတ်သက်နေပုံမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကပြောကြလိမ့်မယ် သတိထားပေးပါတဲ့။ ကျွန်တော်က သူမပြောတာကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး တစ်ချိန်လုံးနားထောင်နေခဲ့တာက သူမရဲ့သားကို စိတ်ကူးယဉ်တမ်းတနေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဆိုတာသိမသွားဘူး။
ဟူး...ကောင်လေးရဲ့ရည်းစား လက်တွေက ကောင်လေးရဲ့အမျိုးသားပစ္စည်းနားတော်တော်ကို နီးကပ်နေတာ။ ပြတင်းပေါက်နားပိုမို တိုးကပ်ပြီး သူတို့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲကြည့်ရပါတယ်။ အဲဒီကောင်လေးက သူ့ကောင်မလေးကို ဆွဲဖက်ရင်ခြင်းအပ်ပြီး နမ်းဖို့လုပ်နေစဉ်မှာ အမေဖြစ်သူက အိမ်ထဲကထွက်လာပါရော။
'ဟေ့....ဟိုနှစ်ယောက်' အမေဖြစ်တဲ့သူက လှမ်းအော်တော့တာပေါ့ အနေအထိုင်က မဟုတ်ကြတာကိုး။ 'အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ကြ ဦး....မြို့ပြင်မှာနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်'
ပြောမဲ့သာပြောတာ ရယ်မောပြီး ကားထဲဝင်ကာမောင်းထွက်သွားပါတယ်။ ကားမောင်းပြီး ခပ်ဝေးဝေးရောက်သွားတော့မှ သက်ပြင်း တစ်ချက်ချမိပါတယ် ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးထင်ပါရဲ့။ အရာအားလုံးရှင်းလင်းသွားပြီဆိုတဲ့ အချိန်လည်းရောက်ရော သူတို့နှစ် ယောက် အိမ်ထဲကို ကသောကမျောပြေးဝင်သွားကြပါတယ်။ သူတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ကျွန်တော်ပိုမိုရင်ခုန်ရပါပြီ။ ရရှိတဲ့အချိန်ကို အလဟဿမဖြစ်အောင် သူတို့အသုံးချကြမယ်ပေါ့လေ။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ကျွန်တော်ပြတင်းပေါက်နားမှာ ဆက်လက်ရပ်နေပြီးမှ မြင်ကွင်းကောင်းကောင်းရဖို့ အိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံတွေဟာ သူတို့အိမ်ခြံစည်းရိုးနား နီးကပ်လာတာနှင့်အမျှ ပိုမိုခုန်ပေါက်လာသလိုပါပဲ။အမှတ်မထင် ကောင်လေး ကိရိယာလွတ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေစဉ် ဘောင်းဘီရုတ်တရက်ကျွတ်ကျတုန်းကမြင်ခဲ့ရဖူးတဲ့ တင်းရင်းကျစ်လစ်တဲ့ တင်ပါးအစုံကို ပြန်မြင်ရဦးမှာပေါ့။ ရုပ်ရှင်ထဲက အနှေးရိုက်ချက်လို ကျယ်ပြန့်တဲ့ ပခုံးမှတစ်ဆင့် ကျစ်လစ်ပြည့်တင်းတဲ့တင်ပါးအစုံရဲ့လှုပ်ရှားမှု တွေကို ပြပြီးမှာ ရှေ့ဖက်ပိုင်းကိုပြသလိုမျိုး သူ့ရဲ့ရှေ့ပိုင်းကပေါင်ကြားမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို ကျွန်တော်မြင်ချင်နေပြီဗျာ။ ကျွန်တော် သူတို့ခြံစည်ရိုး ပုဏ္ဏရိတ်ပင်တွေကြား တိုးဝှေ့ချိန်မှာ နေမင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်။ ညနေစောင်းပြီဆိုကာ 'တာ့တာ' ပြသွားတာကိုး။ မကြာခင် တဖြည်းဖြည်းမှောင်တော့မှာဆိုတော့ ကျွန်တော်ချောင်းကြည့်နေတာကို တစ်ယောက်ယောက်က မမြင်နိုင် သတိမပြုမိနိုင်တော့ဘူးလေ။ ကျွန်တော်လိုက်ကာတွေကာမထားတဲ့ မှန်ပြတင်းအချို့ကနေ စူးစမ်းကြည့်တယ် သူတို့တွေ ဘယ်နားရောက်နေလဲလို့။
ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ ဧည့်ခန်းထဲကိုပြတင်းကနေချောင်းကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ကိုဝိုးတ၀ါးမြင်လိုက်ရပါတယ်။ နှစ်ယောက်လုံးကိုယ်မှာ အ၀တ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်အစုံဟာလည်း တင်းကြပ်နေအောင်ဆုပ်ကိုင်ထားကြတာ။ မြင်ကွင်းကိုရှင်းရှင်းလင်း လင်း မြင်ရမယ့်အပေါက်ကို ကျွန်တော်လိုက်ရှာမိတော့ အိမ်ရဲ့အနောက်ဖက်တံခါးအပေါက်လေးကနေ မြင်ကွင်းကိုရှင်းနေအောင်မြင်ရပါ တယ်။ ကောင်မလေးကို စားပွဲခုံကြီးပေါ်တင်ပြီး သူ့ပါးစပ် နှုတ်ခမ်း လျှာတွေသုံးပြီးအလုပ်ရှုပ်နေတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီ ကောင်လေးရဲ့နောက်ကျောပြင်ကြွက်သားတွေ လက်တွေက ကောင်မလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် အလုပ်များနေတာပဲ ကောင်းကောင်းကြည့် မိတယ်။
ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားဟာလည်း မာပြီးထောင်လာတာ အပြင်ကိုအခုပဲတွန်းကန်ထွက်တော့မယ့်အတိုင်း။ ၀တ်ထားတဲ့ချည်သား ဘောင်းဘီတိုအပေါ်ကနေပြီး ငပဲရဲ့ကွမ်းသီးခေါင်းကို ဖျစ်ညှစ်မိပါတယ်။ အရည်ကြည်တွေဟာ တစိမ့်စိမ့်နှင့် ဘောင်းဘီတောင်ရွှဲမယ်။ ကျွန်တော့်လက်ကိုဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးကြားကနေအထဲကို ထည့်လိုက်တယ်လေ။ ပြီးတော့ လက်ချောင်းတွေဟာ ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ တုတ်ခိုင်မှုကိုဖြတ်သန်းပြီး ရွှေဥတွေဆီ ခရီးထွက်ပါ၏။ သုတ်ရည်တွေနှင့်ပြည့်နေမှာ 'ရှီး..အ..အ' ။ ရွှေဥတွေကိုလက်ချောင်းတွေဖြင့် ပွတ်သပ်ပြီးကစားမိတော့ နှုတ်ဖျားကညည်းညူသံထွက်မိတာ ရုတ်တရက် ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ်ကချောင်းကြည့်နေတာ မဟုတ်လား။
အိမ်အတွင်းဘက်ကို တဖန်ပြန်ကြည့်တော့ လုပ်ငန်းစဉ်က စတုန်းပဲ။ ကောင်မလေးက ဒူးထောက်ထိုင် သူ့ပါးစပ်ကိုဟ မဲမှောင်တဲ့ခြုံပုတ် ငယ်ရှိတဲ့ ကောင်လေးဆီးစပ်နှင့် သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ထိကပ်တဲ့အထိ ဦးခေါင်းကိုခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားနေတယ်ဗျ။ တစ်ခါ တစ်ခါ အော့အန် မလိုဖြစ်နေသေး။ ကျွန်တော်သာဆိုရင် ကောင်လေးရဲ့ အရာအားလုံးကို လွယ်လွယ်ကူကူ အထုတ်အသွင်းလုပ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အခြားလက်တစ်ဖက်နှင့် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုပွတ်သပ်နေမိတာက ကောင်လေးရဲ့ပစ္စည်းကို တောင့်တမိနေခြင်း ပါ။ ဘယ်လောက်ရှုံးနေရတဲ့အဖြစ်လဲ။
အော့အန်မလို ပိုပြီးဖြစ်လာတဲ့နောက် ကောင်မလေးအရှုံးပေးကာ ထရပ်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်လေးရဲ့ ကိုယ်လုံးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်လိုက်ရင်း သူမနှုတ်ခမ်းတွေကို အနမ်းပေးစေပါတယ် တက်မက်စွာ။ ကောင်လေးက သူ့ကောင်မလေးကို စားပွဲကြီးပေါ်မတင်လိုက် ရင်း အစွန်းဖက်ကို တင်ပါးတွေအား ရွေ့စေပါတယ်။ ကောင်မလေးက အလိုက်သင့် ခြေထောက်တွေကို ပခုံးပေါ်လှမ်းတင်လိုက်တော့ ကောင်လေး သူ့ monster ကြီးကိုတရစ်ခြင်းဖိသွင်းကြောင်း သူ့မျက်နှာရဲ့ခံစားမှုအမူအယာကို ကြည့်ပြီး သိရတာပေါ့။ ကောင်မလေး ဘေးကို လက်ထောက်လိုက်တာ ချော်သလိုဖြစ်သွားတာကြောင့် ကောင်လေးက မချီလိုက်ကာ အနေအထားပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဘေးတိုက်မကျတကျ အနေအထားဆိုတော့ မြင်ကွင်းက ပိုရှင်းပေါ့။ ကောင်မလေးရဲ့ခြေအစုံက ကောင်လေးခါးကို ချုပ်ပြုထားတာဆို တော့ ကောင်လေး အားရပါးရအထုတ်အသွင်းလုပ်တိုင်း monster ကြီး တွင်းအောင်တာကို ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ညာလက်ချောင်းတွေဟာ ဘောင်းဘီထဲမှာ နင်ပဲငဆထွားနေတဲ့ ငပဲကြီးကို အားရပါးရဆုပ်ကိုင်ကာ ခပ်ဖြေးဖြေးစပြီး -ွင်းထု မိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဒူးအစုံကို တံခါးနံရံမှာဖိပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကို ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ရင်း အပေါက်လေးကနေ ချောင်းပြုရတယ် လေ။ ကောင်လေးတစ်ချက်ခြင်း အထုတ်အသွင်းပြုလို့ အပြင်တစ်ခါထုတ်တိုင်း ကောင်မလေးခမျာ မျက်ဖြူစိုက်တော့မလို ဖြစ်ဖြစ်သွား ရဲ့။ ကောင်လေးရဲ့ ရွှေဥတွေကလည်း လုံးဝန်းကြီးမားလိုက်တာ ကောင်မလေးရဲ့ လက်တစ်ဖ၀ါးစာတွင်းလေးထဲ ခပ်သွက်သွက်အသွင်း အထုတ်လုပ်ရင်း တဖတ်ဖတ်နှင့်ကို ရိုက်ခတ်နေရော။ ကောင်မလေးရဲ့ ခပ်ထွားထွားနို့အုံကြီးတွေကို ဘဲနာလေးက နှိပ်ပြုဖျစ်ညှစ်တာကို လည်း ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မိပါတယ်။ ပေါက်စီလုပ်ဖို့ ဂျုံတွေကိုရေဆွတ်ပြီး နယ်နေသလိုပါပဲ။ ပြီးတော့ ကောင်လေးက အညိုနုရောင် သန်းနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်မ၊လက်ညှိုးတွေနှင့် ညှပ်ညှပ်ပြီး ကလိတာ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေး တွေက မာပြီးတောင့်လာတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဖာသာပဲ အဲဒီမာနေတဲ့ ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းတွေကို ကိုယ့်ဖာသာပဲပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်မိ ပါရော။ စိတ်ကူးထဲမှာ ကောင်ကလေးက ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းတွေကို သူ့လက်ချောင်းကလေးတွေနဲ့ ကစားဟန်ဆောင်ရင်းပေါ့။
'အတွင်းထဲမှာ....အတွင်းထဲမှာ ပန်းမထည့်နဲ့နော်' ကျွန်တော် ကောင်မလေးရဲ့ တုန်ရင်လှိုက်မောသံနှင့်အတူ အလန့်တကြားပြော လိုက်သံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ သူမရဲ့လက်တွေက နို့အုံတွေကိုဖျစ်ညှစ်ထားတဲ့ကောင်လေးရဲ့လက်ဖျံတွေကို အမိအရဆုပ်ကိုင်ထား သလို နှုတ်ခမ်းအစုံကလည်း အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ပုံသဏ္ဌာန် 'O' ကိုဖြစ်နေရော။ ကောင်လေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း ဆာ လောင်မွတ်သိပ်မှုနှင့် အားရပါးရစားသုံးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်လိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကလည်း သူတို့နှင့်ထပ်တူမျောနေ ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တောင့်တင်းလာကာ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါရဲ့။ ကောင်မလေးရဲ့အော်သံကိုအရင်ကြား ရတာပါ တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်တုန်ခါ အရည်တွေရွှဲအောင် ယိုစီးရင်းပေါ့။
'Fuck! ဆွဲထုတ်...အ...အပြင်ဆွဲထုတ်' သူမအော်ပြီးပြောသံက နောက်ဆက်တွဲ။
သူ ပြုစားတတ်တဲ့အပြုံးနှင့်အတွင်းထဲမှာ ပန်းထုတ်တော့မယ့်ဟန် စနောက်နေသေးတယ်။ ကံကောင်းတဲ့ခွေးမလေးပဲ။ အဲဒီကောင်လေး သာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲပန်းထည့်မယ်ဆို တစ်ခုခုပေးဆိုပေးနိုင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်....ကောင်လေးက သူ့ငပဲကိုအပြင်ဆွဲထုတ်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်လုံးဝမထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး ဖြူပျစ်ပျစ်သုတ်ရည်တွေကို နောက်ဖေးတံခါးရွက်ရယ်၊ အေးစက်စက် အင်္ဂတေနံရံတွေဆီပန်းထုတ် ပစ်လိုက်မိပါ၏။ ကျွန်တော့်ကိုယ့်ခန္ဓာလှုပ်ခါအသက်ရှူမမှန်ဖြစ်သွားမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်ကလေး သူ့ငပဲကိုဆွဲထုတ် ကောင်မလေးရဲ့ ဗိုက်သားပေါ် ပန်းထုတ်တာကိုတော့ အမိအရကြည့် 'အား...'တစ်ခါ ပန်းထုတ်တိုင်း တစ်ခါပိုပိုများလာသလိုပဲ။
ကောင်လေးရဲ့ နောက်ဆုံးအထွက်နှင့်အတူ ကျွန်တော် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ အားအင်တွေ ကုန်ခန်းပြီးရင်ထဲ ဟာသလိုလိုဖြစ် သွားလို့ပါ။
'နင် အသံတစ်ခုခုကိုကြားလိုက်လား?' ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေ အေးခဲသွားပြီ။
'အပြင်မှာ တစ်ယောက်ယောက် ရှိနေတယ်လို့ ငါထင်တယ်ဟ' သူမကဆိုတယ်။
'မနောက်စမ်းပါနဲ့ဟာ ဒီအိမ်နားမှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး'
ကျွန်တော့်မှာ အသက်ကို ကမန်းကတန်းရှူ မြင်ကွင်းကနေကွယ်ရာ ပုဏ္ဏရိတ်ခြုံခပ်ကြီးကြီးနောက်ကိုဝင်ပြီး ကောင်လေးအပြင်လမ်း လျှောက်ထွက်လာတာကို စောင့်ကြည့်နေမိပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့သူ့လက်အစုံက သူ့ကိုယ်ပိုင် ရတနာကို ဖုံးအုပ်ရင်း ထွက်လာပါရော။ ကျွန်တော့်မျက်ခုံးပေါ်က ချွေးသီးချွေးပေါက်က လိမ့်ကျလာတာ....။
'တစ်ယောက်မှမရှိဘူး' ကောင်လေးက အိမ်အတွင်းဘက်စီလှည့်အော်ပါတယ်။
ကောင်လေးအိမ်အတွင်းဘက်ကို ပြန်လှည့်တော့ ၀ိုင်းစက်ပြည့်တင်းနေတဲ့နောက်ပိုင်းကို ပြောင်ရှင်းနေအောင်မြင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ပြီး သက်ပြင်းချမိကာ ကောင်လေးရှိရာဘက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့မျက်နှာဟာ ကျွန်တော်ရှိရာကို တည့်တည့်။ 'သွားပြီ' ကျွန်တော့်ကိုမိသွားပြီ။ သူ ခဏတော့ ရပ်တန့်သွားတယ် ရွေ့လျားမှုတွေ၊ ပြီးတော့ အားရပါးရပြုံးကာ မျက်ခုံးတစ် ဖက်ပင့်ပြရင်း အိမ်ထဲကို ၀င်သွားပါတယ်။ ဒါလေးက တကယ့်တိုတောင်းတဲ့ အမူအယာလေးဖြစ်ပေမဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မျှော်လင့် အိပ်မက်တွေ ပိုမိုရှင်သန်လာစေတာပေါ့နော်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတွေကြား ကွာခြားမှုကို သူ့ကိုပြကောင်းပြနိုင်ပါလိမ့်မယ် မကြာသောအချိန်မှာ....။ ။
Alex Aung ( 18 May 2011)
Posted by Alex Aung at 4:22 PM No comments:
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၇၃)
1. ဆရာ့ရဲ့ ရှုထောင့် သက်သက်ကနေပြောမယ်ဆိုရင် ရှည် (သို့) ကြီး စေဖို့အတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အနည်းဆုံး ထိရောက်မှု အရှိနိုင်ဆုံး နည်းလမ်းကို ပြောပါဆိုရင် မည်သည့်နည်းကို ထောက်ခံအားပေးမည်လဲ။
2. ပြီးတော့ အီတလီနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ Andropenis လို ထောက်တိုင်နဲ့ ကွင်းစွပ်ရတဲ့ Extender လို ကိရိယာမျိုးကို ရှည်ဖို့ သက်သက်အတွက်ဆိုရင် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးနည်းပြီး ထိရောက်မှု ရှိနိုင်တယ်လို့ ယူဆပါသလား။
3. မြန်မာ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဤကဲ့သို့သော ပညာပေးခြင်း၊ ဆွေနွေးခြင်း ကိစ္စရပ်များကို ရှက်စရာ ရွံစရာဟု သတ်မှတ်ခြင်း ခံထားရတာကြောင့် ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး-တိုင်ပင်-အကြံဥဏ်ရယူနိုင်သော ဆရာဝန်မှာ ပြည်တွင်း၌ မရှိသလောက် ရှားပါသည်။ ရှိသည့်တိုင်အောင်လည်း တိုင်းပြည်တွင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် မရှိသောကြောင့် ပွင့်လင်းစွာ ပြောရဲဖို့ မလွယ်ကူပါ။
Andropenis နည်းကို Effective non-surgical penis enlargement မခွဲစိတ်ရဘဲ ထိရောက်တဲ့ ကျား-လိင်အင်္ဂါ ကြီးစေနည်းလို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ (ဆိုဒ်) မှာ ရေးထားတာမှန်သမျှတော့ အကောင်းကြီးသာ ပါတယ်။ တခြားနည်းတွေထက် သာတယ်။ Length increase အရှည်4cm (1.6 inches) အထိ တိုးလာစေမယ်၊ Girth increase လုံးပတ် 1.5 cm (0.6 inches) ရှိလာစေမယ်၊ Curvature correction ကောက်နေတာကို ၄ဝ% ဖြောင့်စေမယ်လို့ စာက ဆိုပါတယ်။
ရိုးရိုးနေချိန်ရော သန်မာမှုဖြစ်ချိန်မှာပါ တိုးတယ်ဆိုတာ သိသာတယ်။ ၂ လအတွင်း ပြောတာ မဟုတ်ရင် ငွေပြန်အမ်းမယ် ဆိုတာလဲ ပါသေးတယ်။ ဒီနည်းဟာ Medical principle of traction ဆွဲဆန့်ခြင်း ဆေးပညာ-သဘောတရားကို အခြေခံတယ်။ သူတို့ဆီက ရှေးရိုးဥပမာတောင် ပြလိုက်သေးတယ်။ ကိုယ့်ဆီမှာ ဘာနဲ့ တူမလဲဆိုရင် ပဒေါင် (ကယား၊ ကယန်း) အမျိုးသမီးတွေ လည်ပင်းမှာ ကြေးပတ်တဲ့ ဓလေ့ကြောင့် ကြာလေလေ လည်ပင်းရှည်လေလေသဘော ဖြစ်မယ်။
Andropenis နည်းမှာ Progressive traction force ဆွဲဆန့်အားကို တိုးတိုးလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ ဆွဲအား 600 နဲ့ 1500 grams ကြားမှာ ရှိတယ်။ ဒီလိုလုပ်လို့ Suspensory ligament အရွတ်၊ Corpus cavernosum အတွင်းမွလွှာ နဲ့ တခြားဟာတွေကို သက်ရောက်စေတယ်။ Stimulates growth ရှည်လာစေအောင် နိုးဆွပေးမယ်။
ကရိယာ ၃ မျိုး ရှိတယ်။
1. Andropenis Peyronie လိင်တံ ကောက်နေတာကို ပြင်ဘို့၊
2. Andropenis Mini မွေးရာပါကို ပိုရှည်ဘို့ နဲ့
3. Andropenis Postsurgery ဆီးလမ်း ခွဲစိတ်လိုက်ရလို့ တိုသွားတာကို ရှည်ဘို့အတွက် ဖြစ်တယ်။
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ လိင်တံကောက်လို့ ခွဲစိတ်တာ၊ လိင်တံရှည်ချင်လို့ ခွဲစိတ်တာ၊ လိင်တံပစ္စည်းထည့်တာ၊ လိင်တံကို ထိခိုက်မိလို့ ခွဲစိတ်ရတာ၊ ဆီးထွက်ပြွန်ကျဉ်းလို့ ပြုပြင်တာ၊ ဆီးအိမ်ရောဂါတွေအတွက် ခွဲစိတ်တာတွေ လုပ်ရလို့ လိင်တံ နဂိုထက်တိုသွားရင် ဒီနည်းနဲ့ ပြန်ရှည်စေနိုင်တယ်။
Springs စပရင်တွေကို Stainless steel နဲ့ Shafts ရိုးတံကို Surgical aluminum တွေနဲ့ လုပ်ထားတယ်။ ကရိယာကို တောင့်တင်းမှု မရှိချိန်မှာ တပ်ဆင်ရတယ်။ ကရိယာ အမျိုးအစား အလိုက် တနေ့ ဘယ်နှစ်နာရီ တပ်ထားရတယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်ထားတယ်။ ၄-၉ နာရီ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Advantages အားသာချက်တွေ -
1. ကရိယာကို သူများ မသိအောင် တပ်ထားနိုင်တယ်။ လမ်းသွား၊ ထိုင်နေ၊ ရပ်နေရတယ်။
2. ဘာအလုပ်မှ မပျက်ဘူး။
3. လူမျိုးမရွေး၊ အရွယ်မရွေး ရတယ်။
4. ခွဲစိတ်စရာ မလိုပါ၊
5. ထာဝရ ရလဒ်ဖြစ်တယ်၊
6. ဥရောပမှာ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခံထားရလို့ CE Certification ရှိထားပြီ၊
7. ၉၇% ထိရောက်တယ်။
Disadvantages အားနည်းချက်တွေ -
1. ကုသမှုကို ၆-၇ လ လုပ်ရတယ်။
2. တနေ့မှာ အချိန်ကြာကြာ တပ်ထားရသလို လိုသလိုရလာဘို့ အချိန်ယူရမယ်၊
3. လိင်စိတ် တိုးလာအောင် လုပ်မပေးနိုင်ဘူး၊ ပန်းသေတာ မကုနိုင်ဘူး၊
4. ကရိယာ တပ်ထားရလို့ အနေရခက်နိုင်တယ်၊
5. ကရိယာတခုဟာ ၁၅ဝ ကနေ ၃၅ဝ ဒေါ်လာပေးရတယ်၊
6. စိတ်ရှည်ဘို့နဲ့ ဇွဲလိုမယ်၊
7. လုံးပတ်တိုးမှာက သိပ်မသိသာဘူး၊
ပဌမမေးခွန်းကို နောက်မှာ ဖြေပါရစေ။ ရှည်စေ- ကြီးစေဖို့အတွက် ဘယ်နည်းကို ထောက်ခံ အားပေးရမလဲ။
• လူနာ (ကာယကံရှင်) ကို နည်းတွေ ဘယ်လိုရှိတယ်၊ ဘာက ဘယ်လို စတာတွေ ပြောဘို့သင့်ကြတယ်။ အကောင်းရော ဖြစ်လာနိုင်လောက်တဲ့ ဆိုးကျိုး၊ ကုန်ကျစရိတ် အပါအဝင်ပေါ့။
• ဘာလို့ လုပ်ချင်သလဲ ဆိုတာ အပေါ်မှာလဲ အများကြီး မူတည်သေးတယ်။
• လုပ်ချင်တယ်ဆိုသူဟာ သူ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းက လူရာမဝင်ဘူးလို့ တလွဲထင်နေတာဆိုရင် မမှန်ကြောင်း ပြောရအုံးမယ်။ ယောက်ျား လိင်တံ အတို-အရှည်ဆိုတာ ဆေးပညာ သတ်မှတ်ချက် တခုအရ ပုံမှန်အချိန်မှာ 1.6 inches (4 cm) ထက်တိုပြီး၊ တောင့်တင်းမှု ရှိချိန်မှာ 2.75 inches (7 cm) ထက် နည်းတာကိုသာ ခေါ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအတိုင်းအတာ ရှိရင် သူ့အလုပ်သူ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိလို့ ဖြစ်တယ်။
• လူနာကိုယ်တိုင်ကို ရွေးချယ်ခွင့် ပေးပါမယ်။
Posted by Alex Aung at 2:30 PM No comments:
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၇၂)
Injection of liquid silicone into the penis and the scrotum လိင်တံနဲ့ ကပ်ပဲ့အိပ်ထဲထိုးနည်းမှာ ဆရာ ဖေါ်ပြထား တာတွေအပြင် ဘာ (ဆိုက်အဖက်) တွေရှိ နှိုင်ပါသေးလဲခင်ဗျာ။ ဥပမာ ဆီးသွာခြင်းကို ထိခိုက်စေနှိုင်ပါသလား။ နောက် အသက်ကြီးလာလို့ ရေရှည်မှာ ဘာဆိုးကျိုးတွေ ထပ်ဖြစ်ပေါ်နှိုင်ပါသေးလဲ။ ဆရာ့ဆေးခန်းမှာ လုပ်ပေးပါသလား။
ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း ယေဘုယျနည်းတွေ (၁) မှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ မေးလာတာရှိလို့ နည်းတနည်းကို ဆေးပညာ ရှုဒေါင့်က ရေးပါ့မယ်။ Injection of liquid silicone into the penis and the scrotum ကျားလိင်အင်္ဂါ (လိင်တံ နဲ့ ကပ်ပဲ့ပိတ်) ထဲကို (စီလီကွန်) ဆေးထိုးပေးနည်း ဖြစ်တယ်။
ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေနည်းတွေ အမျိုးမျိုး စမ်းကြ၊ လုပ်ကြတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူတယောက် အရပ်ရှည်ချင်တာဟာ လွယ်တာ မဟုတ်ပါ။ တခြား ကြွက်သားတွေ သန်အောင်၊ ထွားအောင်တော့ သေခြာပေါက် လုပ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရိုး အခြေခံတဲ့ လူ့အရပ်၊ အရိုးလည်းမပါ၊ ကြွက်သားအစစ်လဲ မပါတဲ့ လိင်အင်္ဂါကို ပြုပြင်ဘို့ မလွယ်ပါ။
ဒီနည်းရဲ့ထူးခြားမှုက အလျင်အမြန် သိသာစေနိုင်တဲ့နည်း ဖြစ်ပေမဲ့ လူကြိုက်များလှတော့ မဟုတ်ဘူး။ သိသာမှာက Girth လုံးပါတ် တိုးလာတာ ဖြစ်တယ်။ Shaft အရှည်ကို တိုးတာ မဟုတ်ဘူး။ အများစုကတော့ ၉၀% တိုးစေကြတယ်။ သိပ် ထူးခြားချင်သူတချို့က Penis volume ထုထည် ၉၀၀% တိုးစေအောင်အထိ စံချိန်တင်ထားတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။
အဲ့့ ဒါပေမဲ့ ဘာအသုံးကျပါသလဲ မေးရင်၊
• လိုတာ မရောက်ဘဲ (ကန်တော့ပါ) "သေးပေါက်တာသာ ထူးစေပါသတဲ့"။
• ဒီဆေးထိုးလိုက်လို့ ကောင်းလာတာဖြစ်ဖြစ် ဆိုးလာတာဖြစ်ဖြစ် Irreversible အရင်လိုတော့ ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
• Silicone ဆေးထိုးလိုက်ရင် Blood vessels သွေးကြောတွေနဲ့ Nerves အာရုံကြောတွေကို Disrupting သက်ရောက် နှောင့်ယှက်မှု ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
• ရလဒ်ကတော့ Loss of sensation အာရုံခံနိုင်မှုနည်းပြီး Penetration လိင်အင်္ဂါ ထိုးသွင်းမှုကို ခက်ခဲစေမယ်။
• ကိုယ်လိုချင်တာက ကြီးဘို့သက်သက်မဟုတ်ဘဲ ဆက်ဆံမှုသာဆိုရင် ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေပါမယ်။
တခြား Side effects ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလဲ ရှိအုံးမယ်။
• Inflammation ရောင်ရမ်းတာနဲ့ Discoloration ဆေးထိုးရာ နေရာတ၀ှိုက် အရောင် ပြောင်းလဲသွားမယ်။
• Silicone ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ Granulomas အသားနုဟာ ရောင်နေတဲ့ Nodules အကျိတ်လို ဖြစ်တယ်။
• Silicone ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ တခြားနေရာတွေဆီကိုလဲ Migrate ရွေ့ပြောင်းနိုင်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် FDA က အသိအမှတ်ပြုဘို့ ငြင်းထားတယ်။ ဒါတွေကို ပြန်ထုတ်ချင်ရင် မရဘူးတော့ မဟုတ်ပါ။ ကရိကထများပြီး ဈေးကြီးတယ်။ ဒီဆေးထိုးထားတဲ့ လိင်အင်္ဂါဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တာ သိသာနေမယ်။
သုတေသနတခုမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်က ဆေးအများကြီး ထိုးထားခဲ့သူ ဘယ်လ်ဂျီယန် နိုင်ငံသားတဦး Silicone foreign body reaction ရတယ်လို့ ရောဂါဗေဒအသုံးက ခေါ်တာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ Massive edema အလွန်ရောင်နေတယ်၊ Impotence ပန်းသေသွားတယ်။ Pills ဆေးလုံး၊ Patches ဆေးကပ်ခွါ၊ Traction devices ဆွဲဆန့်ကရိယာတွေလောက် လူသုံး မများပါ။ ကျွန်တော့် ဆေးခန်းမှာ မလုပ်ပါ။
ဒီဆေးပညာစာမှာ ပုံမထည့်တော့ပါ။ ဆေးထိုးထားသူတယောက် (ကိုလာကိုလာ) သံဗူးနဲ့ ယှဉ်ပြထားတဲ့ ပုံမျိုး ရှာရင် တွေ့မယ်။ အဲဒီ ယောက်ျားဟာ ဓါတ်ပုံရိုက်ဘို့သာ မင်းသားဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 12:34 PM No comments:
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၃၅)
October 22, 2009 9:35 PM
ယောက်ကျား တစ်ယောက် လိင်တံဟာ လိင် ဆက်ဆံဖို့အတွက် ဘယ်လောက် ရှိသင် ဘာလဲ။ ပြည်ပြည်စုံစုံ ပြောပြပေးပါ။
အမေးရှိလို့ ရေးရပြန်ပါပြီ။ "ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း" Penis enlargement ကြော်ညာတွေ ဘယ်လောက် ဆွဲဆောင်မှုရှိပါစေ မယုံပါနဲ့ဆိုတာ ပဌမဆုံး မှတ်သား စေချင်ပါတယ်။
ရှေးဟောင် ဂရိပန်းပုလက်ရာ Polyclitus, Marathon Youth, Hermes တွေကို ကြည့်ကြည့်၊ (ရီနေဆန်) ခေတ်က Michelangelo နဲ့ Donatello တို့ရဲ့ Statue of David ရုပ်ထုတွေကိုဘဲ ကြည့်ကြည့် ကျားလိင်အင်္ဂါကို ခပ်သေးသေးသာ ထုဆစ်ထားတာ တွေ့ရပါမယ်။ ဒီခေတ်မှာ ယောက်ျားတယောက်ဟာ ကိုယ့်အင်္ဂါကိုယ် ပြန်ကြည့်ရင် သူများတွေထက် သေးနေသလို ထင်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အပေါ်ကနေ မိုးကြည့်ရတာကိုး။ စိုးရိမ်သူများ ဆရာဝန်ဆီ ရောက်လာလို့ သူတို့ကို စနစ်တကျ တိုင်းထွာတဲ့အခါမှာ ပုံမှန် အရွယ်အစား ဖြစ်နေကြတာ များတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။
ဂရိ (မိုက်သော်လော်ဂျီ) ထဲက Priapos ဆိုတာ ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊ မွေးမြူရေးနဲ့ အသီးအနှံတွေရဲ့ ဘုရားအဖြစ် သာမက ကျားလိင်အင်္ဂါရဲ့ အရှင်သခင်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ သူ့အင်္ဂါဟာ အမြဲတမ်း သန်မာနေတာမို့ ဆေးပညာမှာ အဲလို ပြန်မလျော့ဘဲ ကျားအင်္ဂါ သန်မာနေတာကို Priapism လို့ ခေါ်တယ်။ သူတို့ဘုရားလဲ ရောဂါမကင်းဘူး။ ၉ ရာစု Arabian Nights ပုံပြင်တွေထဲက Ali with the Large Member မှာတော့ ကျားအင်္ဂါ အရွယ်အစားကို သရော်ထားပါတယ်။ "ဒါ ကြီးတိုင်းသာ ဆရာတင်ချင်ရင် 'လား' ကိုသာတင်ကြ" တဲ့။
ခက်နေတာက ဘာမဆို ကြိုက်သလို ပြုပြင်လို့ရတဲ့ Image manipulation ခေတ်ဖြစ်လေတော့ ကြည့်တဲ့သူတွေအဖို့ လှလိုက်တာ၊ ကောင်းလိုက်တာ၊ ကြီးလိုက်တာ၊ စတာတွေဟာ တကယ်ဘဲလို့ ထင်မှတ်စေတယ်။ အမှန်က Illusion ထင်ရောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် Deception လှည့်စားတာတွေပါ။ ဒီတော့ကား အရင်ပေါ် CRT နောက်ပေါ် TFT-LCD (မော်နီတာ) တွေကို မကြည့်ဘဲ ပြဒါးသုတ် ကြေးမုံမှန်ကိုသာ ကြည့်ဘို့ အကြံပြုပါတယ်။
ကျားဖြစ်ဖြစ်၊ မဖြစ်ဖြစ် လူကို အပြင်ပမ်း အင်္ဂါရုပ် ကြည့်ပြီး၊ မွေးရာပါအင်္ဂါက ဘယ်လိုနေမယ်လို့ မှန်းဆပြီး၊ တိုးတိုး တိတ်တိတ် ပြောလေ့ရှိတဲ့ ပေါ်ပြူလာ ယဉ်ကျေမှုက ရှိသေးတယ်။ သုတေသန လုပ်ကြည့်တော့ ဒီလိုမှန်းဆချက်တွေဟာ မတိကျဘူး ဆိုတာ သိရတယ်။ ကိုယ့်ကို ကောင်းတာပြောတာ မဟုတ်ရင် မယုံကြပါနဲ့။
ကျားလိင်အင်္ဂါရဲ့ အရွယ်အစားဟာ အသက်နဲ့လဲ ဆိုင်တယ်။ မွေးကာစ Flaccid penile က4cm ရှိပြီး၊ လူပျိုပေါက်မှာ သိသိသာသာ ရှည်လာတယ်။ အရွယ်နဲ့အမျှလဲ တိုးတက်မှု ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်ကြီးသူတွေကို သုတေသန လုပ်ကြတော့ တချို့က သေးသွားတယ် ပြောသလို၊ တချို့က ပိုကြီးလာသတဲ့။ သုတေသနတိုင်းကိုလဲ အားမကိုးရပြန်ဘူး။
သန်မာ (သာမန် မဟုတ်ပါ) နေချိန် Erectile penis ကို တိုင်းထွာပြီး၊ September 1996 Journal of Urology မှာ ရေးခဲ့တာကတော့ 12.9 cm (5.08 in) ပျမ်းမျှ ရှိပါတယ်။ ဒီဂျာနယ်ကဘဲ ဆိုပြန်သေးတာက ဘယ်လောက်ဘဲ နဂိုက အရွယ်အစားရှိနေနေ သန်မာလာရင် ဘယ်လောက်ထိ ရှိလာမလဲ ဆိုတာကို တိတိကျကျ မှန်းမရပါဘူးတဲ့။ ဂျူး-ကော့ကေးဆပ် ယောက်ျားတွေဟာ သန်မာချိန်မှာ ပျမ်းမျှ 13.6 cm (5.35 in) လို့ December 2000 International Journal of Impotence Research က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျ တိုင်းထွာကြတာမှာ တယောက်နဲ့ တယောက် မတူကြလို့ အများပြောသမျှ ထဲကနေ ပျမ်းမျှယူတဲ့အခါ 12.9–15 cm (5.1–5.9 in) ရှည်ပြီး၊ 2.4 and 5.5 cm (0.9 and 2.2 in) လုံးဝန်းတယ်လို့ မှတ်ယူနိုင်တယ်။ Nine inches monster ဆိုတာ သူရဲခြောက်ပြတာ သက်သက်ပါ။
ကျားလိင်အင်္ဂါဟာ သန်မာချိန်မှာ ၂ လက္မခွဲမှ မရှိရင်တော့ Micropenis လို့ဆိုပြီး၊ ဆေးပညာအရ သတ်မှတ်ပါတယ်။ လိင်ဟော်မုန်းနဲ့ ဆိုင်တာပါ။ Testosterone ပေးရတယ်။ ခွဲစိတ်ပေးရတယ်။ ဆီးထွက်ပေါက်က ပန်းထိပ်ဖျားမှာ မရှိဘဲ၊ လိင်တံရဲ့ အောက်ခြေ တနေရာရာမှာ ရှိနေတာမျိုးက Hypospadias ဆိုတဲ့ မွေးရာပါဖြစ်တယ်။ ခွဲစိတ် ပြုပြင်လို့ရတယ်။ ဒီအင်္ဂါရဲ့အရွယ်အစားဟာ မျိုးရိုးအရ မဟုတ်ဘဲ၊ အစာအာဟာရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တို့နဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ Pesticides, Triclosan, Plasticizers, Lavender oil ဓါတုဆေးတွေ ညစ်ညမ်းနေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တချက် မှတ်ဘို့က ဒီလို "ကဲ" ဘို့ တကယ်တန်း မလိုလှပါ။ Psychology Today ရဲ့ (ကာဗာ-စတိုရီ) တခုမှာ အမျိုးသမီး ၁၅၅ဝ ယောက်ရဲ့ အများစုက "အရွယ်အစား ဂရုမစိုက်ဘူး" ဆိုပါတယ်။ ၇၁% သော ယောက်ျားတွေကသာ ကိုယ့်ဟာကို ဂရုအစိုက် လွန်နေကြပါသတဲ့။ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တုံးက Internet survey တခုမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုသာ စိတ်ဝင်စားသူပေါင်း ၅၂ဝ၃၁ ယောက်ကို မေးမြန်းတဲ့အခါ ကိုယ့်အရွယ်အစားကို ကျေနပ်ကြသူ ယောက်ျား ၅၅% ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီး ၈၅% ကတော့ သူတို့ အဖေါ်တွေရဲ့ အရွယ်အစားကို ကျေနပ်ကြကြောင်း ဖြေပါတယ်။ အမျိုးသမီး ၆% ကသာ အနုတ်သဘောဖြေတယ်။ သူတို့တတွေထဲကဘဲ ၇ဝ%သော အမျိုးသမီးများက ကိုယ့်ရင်သားကိုယ် ကျေနပ်ကြပြီး၊ ၅၆% သော ယောက်ျားများကတော့ သူတို့အဖေါ်ရဲ့ ရင်သားကို ပိုထွားစေချင် ကြပါသတဲ့။ ဒီတော့ လိုတာထက် ပိုချင်နေကြတာ ယောက်ျားများပါဘဲ။
BMC Women's Health ကနေ သုတေသနလုပ်တော့ width rather than length လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ ဆန္ဒပိုလို့ အလိုရှိသူများ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ဆရာဝန်တွေအဖို့ ရောဂါကို ကုရတာထက် ရောဂါမဟုတ်တာကို ကုရတာ ပိုပြီး လက်ဝင်လှပါတယ်။
"ဒါး"နဲ့ စပြောပါမယ်။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်နည်း။ Penis lengthening (Enhancement Phalloplasty) နဲ့ Penis widening (Girth Enhancement) ဆိုတာတွေ Urologic literature ထဲမှာ ပါနေပါတယ်။ ခွဲစိတ်-ခန္ဓာဗေဒအရ ကျားလိင်အင်္ဂါရဲ့ သုံးပုံတပုံ ကနေ တဝက်လောက်ဟာ ကိုယ်အတွင်းထဲက ဆီးစပ်ရိုးအောက်ခြေမှာ တွယ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအပိုင်းကို အပြင် ရောက်လာအောင် Fundiform ligament နဲ့ Suspensory ligament အရွတ် ၂ ခုကို ခွဲစိတ်ပြီး၊ အပြင်ကို ထုတ်ပေးတာပါ။ တခုက ကောက်နေအောင် ဆွဲပေးထားခဲ့တာမို့ ဖြတ်လိုက်ရင် ဖြောင့်ပြီး၊ 2-3cm (0.78-1.18 in) ပိုရှည် လာစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ လန်ဒန် St. Peter's Andrology Centre and Institute ကနေ ခွဲစိတ်ကုသခံသူ လူနာ အများစုဟာ သိပ်ကြေနပ်မှု မရှိကြကြောင်း၊ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
နောက် ခွဲစိတ်နည်း တခုကတော့ Dermal implant ခေါ်တယ်။ Fat cells တွေကို Transplant လုပ်ပေးတာပါ။ နောက် တနည်း ကတော့ Inflatable implants ဖေါင်းစေတဲ့ပစ္စည်း ထည့်ပေးတဲ့နည်းပါ။ ဒီနည်းကို ပန်းသေနေသူတွေအတွက် လုပ်ပေးတာပါ။ စပေါ်တော့ အမှတ်ရသေးတယ်။ Time International မဂ္ဂဇင်းမှာတောင် ပါခဲ့သေးတာ။ Penis pump ဆိုတဲ့ ဆလင်ဒါလို လေဟာနယ် ကရိယာလည်း ရှိတယ်။ ပန်းညှိုးသူတွေအတွက် လုပ်ပေးတာပါဘဲ။ Clamping နည်း၊ Stretching and hanging နည်းလဲရှိတယ်။ တခြားနည်းတွေကိုတော့ လေးစားခံရတဲ့ ဆေးပညာ အသိုင်းအဝိုင်းက အသိအမှတ် မပြုပါ။ ဒီအထဲ မပါတာဆိုရင် ဘေးချိတ်ပေါ့ဗျာ။
"ဒါး"ပြီးတော့ "လက်" လာမယ်။ (အက်တာနက်) မှာ Penis enlargement pills, Penis patches, Ointments တွေ အမျိုးမျိုး ကြော်ညာနေတယ်။ Spam email messages တွေထဲမှာ အများဆုံးပါဘဲ။ အမိုင်နိုအက်စစ်တမျိုးကို Lotion for men လိမ်းဆေးအဖြစ် သုံးကြတယ်။ Andractim DHT Gel - DHT (Dihydrotestosterone) ဆိုတာက Testosterone ကို အားကောင်းအောင် လုပ်ထားတဲ့ လိမ်းဆေး။ Micropenis လို ဖြစ်နေသူတွေအတွက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ Flora Research of California နဲ့ University of Maryland တို့ကနေ အဲဒါတွေမှာ (mold, yeast, E. coli bacteria, pesticides, and lead) အန္တရာယ် ပေးတဲ့အရာတွေ အများကြီး ပါတယ်လို့ ရေးပါတယ်။
ကျားလိင်အင်္ဂါမှာ ကြွက်သားဆိုတာ မရှိလို့ Penis Exercises လေ့ကျင်ခန်းလုပ်တာ မထူးဘူးလို့ ယေဘူယျပြောနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြွက်သားတမျိုးတည်းကိုသာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးနိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါ။ အင်္ဂါကို လှုတ်ရှားစေအောင် ကြွက်သားတွေ၊ အရွတ်တွေ၊ အာရုံကြောတွေ စုပေါင်းရွက်ဆောင်ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Disuse atrophy အသုံးမပြုတာ ကြာတဲ့ အရာတွေဟာ သေးငယ်သွားတတ်တယ်။ အသုံးပြုပေးရင် ပိုလာစေတယ်။ အလွန်အကဲတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
ဆေးဝါးတွေနဲ့စာရင် လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာက ဘေးထွက်ဆိုကျိုးကို မစိုးရိမ်ရပါ။ ဒါ့ကြောင့် Jelqing Technique နည်းဆိုတာ ဘာသာပြန် ရေးရရင် - ရေနွေးချိုးပါ၊ ရေနွေးဝတ်သုံးပါ။ ပိုးသန့်တဲ့ ဆီတခုခု လိမ်းပါ။ အရင်းကနေ အဖျားဆီ လက်တဖက်နဲ့ ခပ်တင်းတင်း ကိုင်ပြီး၊ ဆွဲချပေး။ လက်ကိုလဲ ဘယ်-ညာပြောင်း၊ ၁၅ကြိမ်လုပ်ပါ။ သန်မာလာတာကို ၂ဝ-၄ဝ% အထိသာ ဖြစ်လာပါစေ။ ပိုမသွားအောင် နားပါ။ ဆီ ဆိုရာမှာ အိန္ဒိယဆိုရင် မုံညင်းဆီ၊ မြေထဲပင်လယ်ဒေသမှာဆို သံလွင်ဆီ စသဖြင့် သုံးတယ်။ သူတို့အရပ်မှာ ပေါတာတွေကိုး။ ဗမာပြည်မှာ နှမ်းဆီ၊ အုံးဆီ၊ ကြက်ဆူဆီ စတာတွေ သုံးနိုင်ပါမယ်။ ဒီကိစ္စအတွက် သီးသန့်ခွဲထားပေါ့။ မဟုတ်ရင် မှိုရောဂါဝင်တတ်တယ်။ ပြီးရင် ဆပ်ပြာနဲ့ ကောင်းကောင်း ဆေးကြောပါ။
မင်းတုံးမင်းကြီးဟာ ဒီကိစ္စမှာ ရာဇဝင်တွင် နာမည်ကြီးခဲ့သူပါ။ သူ့ခေတ်က တိုင်းရင်းဆေး ခေတ်မို့ ဆေးစွမ်းကောင်းတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။ မင်းကြီးမှာလဲ Priapism ရောဂါ ရှိခဲ့ပုံရပါတယ်။ ကျားအင်္ဂါဟာ ၂ နာရီ ကြာတာတောင်မှ နဂိုအနေ ပြန်မရောက်ရင် အရေးပေါ် ဆေးကုပေးဘို့ လိုပါတယ်။ Pseudoephedrine 120 mg orally ဆေးမရှိသေးလို့ သူ့မိဘုရားကြီးကဘဲ ဆေးကုပေးရတယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ ဆေးသုတေသနအရ မဟုတ်ပါ။ နန်းတွင်း ဆောင်ကြာမြိုင် ဇာတ်လမ်း အရသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ အစစအရာရာ အကန့်အသတ်တွေက လိုတာထက် များလွန်လွန်းလို့၊ သုတေသနဆိုတာ ဝေလာဝေး၊ ထုတ်ပြော၊ ဖွင့်ရေး၊ အပြန်အလှန် ငြင်းခုန်တာတွေ မရှိလို့ ဘယ်သူပြောတာ ယုံရမလဲ မသိဖြစ်နေရတယ်။ ကုန်းဘောင်ခေတ် ဆေးနည်းတွေ ကုံးကောက်နေရသလို ဖြစ်သွားနေရတာ သိပ်နှမြောဘို့ ကောင်းလှတယ်။
အနောက်တိုင်းကဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်းရင်းဆေးဖြစ်ဖြစ်၊ တကယ်တန်း လက်ခံနိုင်တဲ့ ဆေးနည်းတွေကို လက်လှမ်းမီဘို့၊ အများသူငါ သိနိုင်၊ သုံးနိုင်ကြဘို့၊ တိုးတက်အောင် မလုပ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ ခေတ်ကာလမှာတော့ အလိုရမက်များ နည်းပါးနိုင်ကြပါစေ။
ရှည်ချင်၊ ကြီးချင်သူများအတွက် (နောက်ဆက်တွဲ)
Injection of liquid silicone into the penis and the scrotum လိင်တံနဲ့ ကပ်ပဲ့အိပ်ထဲထိုးနည်းမှာ ကောင်းတာရော ဆိုးတာပါ ရှိတယ်။ လုံးပါတ် သိသိသာသာ တိုးလာမယ် မရှည်စေပါ။ ၉ ဆအထိ ကြီးစေနိုင်တယ်။ ဆေးထိုးလိုက်လို့ အနားက တစ်ရှူး (သွေးကြော၊ အာရုံကြော) တွေထိခိုက်နိုင်ပြီး ထုံလာတတ်တယ်။ အမာရွတ်လိုဖြစ်တတ်တယ်။ အဆင်မသင့်ရင် လိင်ဆက်ဆံတာမှာ ပြောင်းပြန်အကျိုး ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ FDA ကအသိအမှတ် မပြုသေးဘူး။ လူ ၅၈ ယောက်ကို စစ်တမ်းထုတ်တော့ ဒီလိုတွေ့လာရတယ်။
• အရှည် Length = YES 276; NO 690
• အတုတ် Thickness = YES 483; NO 414
• အချိုးအစား Proportion = YES 328; NO 483
• ပုံသဏ္ဌာန် Asthetics = YES 172; NO 776
• အလုပ် Function = YES 621; NO 224
Internet ကနေ Pills (Penis enlargement pills, penis patches or ointments) ကြော်ညာတာတွေ မကောင်းပါ။ Flora Research of California and by the University of Maryland က အဲဒီဆေးတွေထဲမှာ မှို၊ ဗက်တီးရီးယားတွေ ပါတယ်လို့ ပြောတယ်။
Stretching ၂ဝဝ၂ မှာ International Journal of Impotence Research ပြောတာက ကောင်းတယ်တဲ့။ ၂ဝဝ၉ မှာ University of Turin ကလဲ ကောင်းတယ် ပြောတယ်။ ပလပ်စတစ်ကွင်း နဲ့ Dynamic metallic rods ၂ ခု ပါတယ်။ ဆွဲဆန့် ပေးနေမယ်။ တနေ့မှာ ၄ နာရီ၊ ၆ လ လုပ်ရင် အရှည် ၂-၃ စင်တီမီတာ တိုးလာတယ်။
မေးခွန်းကို ဖြေဘို့ ချုပ်လို့ ရပါပြီ။ လူတယောက်နဲ့ တယောက် အခြေခံ မတူကြပါ။ သူတို့အဖေါ်တွေလဲ ကွဲလွဲကြမယ်။ (ဗိုင်ယာဂရာ) ဆေးက တချို့အတွဲတွေအတွက် အလွန်မတန်ကောင်းပြီး တချို့မှာ အသင့်အတင့် ကောင်းပါမယ်။
Jan 8, 2011 at 7:08 PM
ကျွန်နော့် အသက်က ၂၄ နစ် ရှိပါပြီ။ မိန်းကလေးနဲ့ ၂-၃ ကြိမ် ဆက်ဆံဖူးပါတယ်။ မိန်းကလေးကပြောတယ် ကျွန်နော့်ရဲ့ ကျားအင်္ဂါဟာ သူတွေ့ဖူးသမျှ လူတွေထဲမှာ အသေးဆုံးတဲ့ သေးတာက သာမန်လူတွေထက် ပိုသေးနေတာတဲ့။ မိန်းကလေး တစ်ယောက် နောက်တစ်ကြိမ် ဆက်ဆံဖို့ ဆွဲဆောင်နိုင်မှု အားနည်းမယ်တဲ့။ မိန်းမရရင်တောင် နင့်မိန်းမက အရင် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံဖူးတာဖြစ်ဖြစ် အခွေကြည့်ဖူးတာဖြစ်ဖြစ် နင့်ဟာကိုသိသွားပြီး စွဲလမ်းမှုနည်းမယ်တဲ့။ ပြဿာနာ ရှိနိုင်တယ်တဲ့။ အဲ့ဒီတော့ လိင်တံကြီးမဲ့ ရှည်မဲ့ နည်းလမ်း (သို့မဟုတ်) ဆေးညွှန်းလေးတွေရှိရင် ပြောပြပေး စေချင်ပါတယ်။ အားငယ်စရာဖြစ်နေလို့ပါ။ ပုံမှန် လိင်အဂ်ါမထခင်မှာဆို ပိုသိသာတယ်။ သေးပြီး တိုနေတယ်။ စိတ်ကြွ နေရင်တော့ နည်းနည်းလေး ပိုကြီးလာတယ်။ ဒါကလည်း သာမန် ယောက်ျားလေးတွေ ဟာတွေထက်တော့ သေးနေလွန်းလို့ပါ။ လက်ရှိနေတာက ပြည်ပမှာဖြစ်ပါတယ်။
• Penis enlargement ကျားအင်္ဂါ ကြီးစေခြင်း ကို ဖတ်ပြီးပြီလား။ ဖတ်ပါ၊ လုပ်လို့ရတာ လုပ်ပါ။ အတုအပတွေ၊ မသေခြာတဲ့နည်းတွေ အားမကိုးပါနဲ့၊ လက်တည့်မစမ်းပါနဲ့။
• အဲဒါထဲမှာ မပါသေးတာ ရေးပါအုံးမယ်။ ပဌမအချက် စိတ်အား မငယ်ပါနဲ့။ ကြိုးစားနေရင်း ကြီးလာမယ်လို့ စွံမြဲယုံကြည်ထားပါ။ သစ်ပင်-ပန်းပင်တွေကိုတောင် စိတ်နဲ့ ဖူးစေ-ပွင့်စေ လုပ်လို့ရတယ်။
• ဆက်ဆံရာမှာ အရွယ်အစား မကြီးသေးဘူးဆိုရင် တခြားနည်းနာနဲ့ ပိုအဆင်ပြေမှာ လုပ်ရမယ်။
• ငွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ မိန်းမတွေဟာ တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ မတူပါ။ အပျော်မိန်းမတွေကို ထားလိုက်ပါ။ တခြားမိန်းကလေးနဲ့ ဆိုင်တာဘဲ ရေးပါမယ်။
• ကိုယ့်မှာ မရွယ်အစား သေးတယ်ဘဲ ထားပါ၊ တခြားအရာမှာ သူများထက် သာအောင်လုပ်ဘို့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း မျက်စိမမြင်သူဟာ နားအကြား ပိုနိုင်တယ်။
• ဘာတွေ သာစေရမလဲ။ အများကြီးပါ။ အဖေါ်မိန်းကလေးကို သာယာ-ကျေနပ်စေမှာ ရွေးတတ်ရမယ်။
• သူဘာကြိုက်သလဲ သိအောင် ကြိုးစားပါ။
• ဇနီး-ချစ်သူ မပေါ်မှာ လိင်ဆက်ဆံတာ တခုထဲကိုသာ မစဉ်းစားပါနဲ့။ ကာမဆက်ဆံတယ်ဆိုတာ ချစ်ခြင်းရဲ့ အဆုံးစွန် တနေရာကို သယ်ပို့တာ ဖြစ်တယ်။ ပိုချစ်တတ်အောင်လုပ်ဘို့ လိုပါမယ်။
• လိင်ဆက်ဆံတာကို ပြောရအောင်။ မဆက်ဆံမီ၊ ဆက်ဆံဆဲ နဲ့ အပြီး သုံးပိုင်းရှိတယ်။ သုံးပိုင်းလုံးမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါစေ။
• Foreplay အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ သူကြိုက်မှာ ရွေးတတ်ပါစေ။ မတူကြပါ။ အချိန်ပေးပါ။
• အင်္ဂါအရွယ်အစားဟာ ဒုတိယပိုင်းမှာသာ နေရာရှိပါတယ်။
• တကယ့်အဆင့် -
o (အိုရယ်လ်) နည်းလဲသုံးပါ။ တချို့မိန်းကလေးကို ဒီနည်းတခုထဲနဲ့ (အော်ဂဇင်) ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ တခါတလေဖြစ်ဖြစ် ရစေပေါ့။ (အိုရယ်လ်) ကလဲ အပြန်-အလှန်ပေါ့။
o (အေနယ်လ်) နည်းလဲ သဘောဘဲ။ သူက မကြီးရင်လဲ ဖြစ်တယ်။
o မိန်းကလေးတွေကို ထိမိစတဲ့နေရာဆိုတာ ရေးထားသလို နေရာတွေကို အသုံးပြုပါလေ။
o ကိုယ်ကပေးနိုင်တဲ့ အချိန် ပိုနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ကြာကြာ ဆက်ဆံနိုင်ပါစေ။
o (ပိုဇေရှင်) အပြောင်းအလဲ၊ အရှိန် အပြောင်းအလဲ၊ နေရာထိုင်ခင်း အပြောင်းအလဲ။
o သူလိုခြင်တဲ့ အရာရှာပါ။ ဖြည့်ဆီးပါ။
o သူ (အော်ဂဇင်) ရအောင် ကြိုးစားပါ။ စောစောပိုင် မရသေးလဲ လုံးဝ စိတ်ပျက်ပါနဲ့။
• လိုအပ်လာရင် Virgra ဆေး သုံးပါ။
• ကိုယ်က အဆင်သင့် မရှိရင် သူစိတ်မလာစေအောင် ကြံဆောင်ပါ။
• တခါပြီး နောက်တခါ ဆက်ဆံနိုင်ပါစေ။
• တချို့မိန်းမတွေ နာတာ မကြိုက်ပါ။ အရွယ်အစားကြောင့် နာစေတတ်တယ်။
• ဖူးဇာပါရင် ငယ်ရွယ်သူကို ယူပါ။
• တခါမှ မဆက်ဆံဘူးသူကို ရွေးနိုင်ရင် ရွေးပါ။
• စိတ်အား မငယ်ပါနဲ့။ ကြိုးစားနေရင်း ကြီးလာမယ်လို့ စွံမြဲယုံကြည်ထားပါ။ သစ်ပင်-ပန်းပင်တွေကိုတောင် စိတ်နဲ့ ဖူးစေ-ပွင့်စေ လုပ်လို့ ရတယ်။
• ထပ်ရေးပါရစေ။ စိတ်အား တင်းပါလေ။ ကိုယ်လိုလူတွေ တလှေကြီးပါ။ Small is beauty!
Posted by Alex Aung at 12:33 PM No comments:
ဘုရားသခင်! မိုးစက်တွေကိုကျွန်တော်မုန်းလိုက်တာ ။ ။
ဆိုင်ရဲ့ရှေ့ဘက် မှန်ပြတင်းတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်နေတာလေ မိုးစက်တွေက။ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ဒီလိုအချိန်အတွက် အပူပိုင်း ဒေသမိုးတစ်ခုလိုမျိုးပေါ့။ မဲမှောင်နေတဲ့ တိမ်တိုက်ကြီးတွေက နေ့လယ်ခင်းရောက်သည်အထိ ကောင်းကင်ပြာကို ဆွဲဖုန်းထားတာဗျ။ ရာသီဥတုအပူချိန်ကလည်း ဒီဂရီအတော်များများ နိမ့်ကျနေရော။ လမ်းမတလျှောက်မှာလည်း ရေတွေလွှမ်း၊ အိမ်ခေါင်မိုးတွေမှာလည်း ရေတွေသီးလို့။ နောက်တစ်နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျွက်ကျွက်ပူမယ် အရှင်နေမင်းကြီးကပြန်လာပါတော့မယ်။ မိနှစ် နှစ်ဆယ်အတွင်း အရိုးတွေထိအောင်ခြောက်ပြီးတော့ ပူလောင်အိုက်စပ်ဦးမှာ အပြင်ဘက်မှာလေ။
ဒီနေ့ မွန်းတည့်ချိန်က တခြားနေ့တွေနဲ့ ထူးမခြားနားပါပဲ။ မှန်တံခါးတွေကို မိုးစက်တွေက ပစ်ပေါက်နေတာ စောင့်ကြည့်နေမိပါတယ်။ မကြာခဏ လက်ခနဲဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ အလင်းရောင်ပြန်တွေကိုရောပေါ့။ မိုးကြိုးချိမ်းသံတွေ လျှက်ပြက်တာတွေက ခန်းဆီးလိုက်ကာနဲ့ အတူ ကျွန်တော့်အရိုးတွေပါ တုန်တုန်သွားစေပါတယ်။ လမ်းမကြီးကလည်း ပျက်သုဉ်းသည့်အလား သွားလာသူတို့သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒီလိုမိုးသက်မုန်တိုင်းကြားထဲ ဘယ်နိုင်ငံခြားသားက အရဲစွန့်အပြင်ထွက်လာပါ့မလဲနော်။ သူတို့တွေက ကျွန်တော့်အဓိကဖောက်သည် တွေမဟုတ်လား။ များလှစွာသော တွေထဲက Cafe တစ်ခုခုဆီမှာ ပူနွေးတဲ့အစားအစာ၊ ကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်နှင့် အချိန်ကုန်ဆုံးနေမလား? ဈေးသက်သာတဲ့ အမှတ်တရ T-shirt တွေကိုစု ဒါမှမဟုတ် souvenirs ဆိုင်တွေမှာ စပ်စပ်စုစု ၀ယ်ခြမ်းမွှေနှောက်နေကြရော။
ငေးနေတဲ့ ပြတင်းပေါက်ကနေခွာ ဆိုင်ခန်းအနောက်ဖက်ကိုသွား ရေခဲသေတ္တာထဲက Coke တစ်ဘူးလောက်ဆွဲပြီး သံကွင်းလေးကို ဆွဲ ဖွင့်ကာရှိသေး ဆိုင်ရှေ့က တံခါးဘဲလ်သံ မြည်လာတယ်။ သက်ပြင်းခပ်လေးလေးချလိုက်ရင်း မျက်လုံးတွေကို ဟိုသည်လှိမ့်လိုက်မိပါရဲ့။ တိုးရစ်တစ်ယောက် ကျွန်တော့် tattoo ဆိုင်လေးက မိုးသက်မုန်တိုင်းကနေ ဖယ်ခွာနေဖို့ နေရာကောင်းလေးတစ်ခုအဖြစ် ဆုံးဖြတ်လိုက် ဟန်တူတယ်။ အချိန်အားလုံးလိုလို ဖြစ်နေခဲ့တာပဲလေ မိုးခိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် နံရံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ tattoo poster တွေ၊ စင်ပေါ်မှာထား တဲ့ tattoo design catalogs တွေလှန်ကြည့်မယ်၊ tattoo ထိုးပြီးသွားသူတွေ အမှတ်တရ ရိုက်ပြီးထားခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကြည့် မယ်၊ ပြီးတော့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ( Q:နာလားဟင်? Q:သန့်စင်ခန်း ခဏသုံးလို့ရမလား? Q: တစ်လက်မပတ်လည်လောက်ပုံဆိုရင် ဘယ်လောက်ကျမလဲဗျ?) မေးပြီး ကျွန်တော့်အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးပစ်ကြပါမယ် ပျှမ်းမျှအားဖြင့်ပေါ့။
ဆိုင်ရှေ့ဘက်ပြန်လှည့်လာချိန် ကျွန်တော့်မျက်နှာသွင်ပြင်ဟာ နည်းနည်းတော့ ပြောင်းသွားမိပါရဲ့။ ၁၈နှစ်၊ ၁၉နှစ်ထက် လုံးဝမပိုတဲ့ ကောင်ငယ်လေးတစ်ယောက် တံခါးဝမှာ ကြောက်လန့်စွာ ရပ်နေတာကို ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အရပ်နည်းနည်းမြင့်ပြီး သွယ်လျပါ တယ် ခန္ဓာကိုယ်က။ ၀တ်ထားတဲ့ body size T-shirt နှင့် cargo ဘောင်းဘီတိုဟာ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာလေးမှာ မိုးစက်တွေနှင့်အတူ ကပ်နေ ရော။ ပခုံးပေါ်ကပိုကရိုကျနေတဲ့ သူ့ဆံနွယ်ရှည်တွေဟာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ပခုံးတလျှောက် ကပ်နေဟန်။ ရေစက်တွေ အတော်များများဟာ သူ့ပခုံးတွေ လက်မောင်းတွေကနေစီးကျနေတယ်။ အ၀တ်တွေကစိုပြီးကပ်နေတော့ အလွန်ကောက်ကြောင်းလှတဲ့ abs တွေ ဗိုက်ကြွက် သားတွေကို တမင်ပြနေသလိုပါပဲ။
အိုကေ - ကောင်ကလေး '၀င်ခဲ့ပါ' မျက်မှောင်ကျုံ့နေတာလည်း ပြေလျော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းမှာလည်း အပြုံးတစ်ခုပေါ်လာတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
တိုးရစ်တစ်ယောက်ကြောင့် အပျင်းထူနေရမယ့်အစား အနည်းဆုံးတော့ မျက်စိ အစာကျွေးလို့ရမယ့်အနေအထားပေါ့။ သူ ဆိုင်ထဲဝင် လာရင်း ရှက်ပြုံးပြုံးပြတာ ကျွန်တော့်ကိုလေ အပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ ခံစားရသလို sexy ဖြစ်တယ်လို့လည်း တပြိုင်တည်းခံစားရစေ ပါတယ်။ အင်း... ကောင်တာရဲ့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတစ်ဝက်လောက်ကို သူမမြင်အောင် ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်တာကို ရုတ်တရက် ၀မ်းသာမိပါပြီ။ ဘာကြောင့်ဆို ၀တ်ထားတဲ့ Levi's ဂျင်းဘောင်းဘီထဲက ထွားကြိုင်းလာတဲ့ monster ကြီးကြောင့် ဒီကလေးကို ခြောက် လှန့်သလို ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။
ကောင်းပါ့....မကောင်းဆိုးဝါးကောင် အလိုက်မသိ ခေါင်းထောင်ထလာသေးတယ်။ သူ့ကို လက်ငါးချောင်းနှင့် ကောင်းကောင်းမဖျစ် ညှစ်သေးလို့ထင်တယ် မတ်နေအောင်ထောင်တာ။ '၀င်ခဲ့ပါ' ၀မ်းသာအားရကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေက ခပ်လုံးလုံး သူ့လက်မောင်းဆုံတွေနှင့် သန်မာသော လျက်ဖျံတွေကို မျက်စိအစာကျွေးနေမိတာ။ ဒီကလေး ကာယလေ့ကျင့်ခန်း အတော် လုပ်တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲ ဒီကောင်လေးကို ပွေ့ချီပြီး ကစားမိရဲ့။
'အကို ဘာလုပ်ရမလဲ ညီ့ကို? အဲ...ညီ့ကိုဘာများ လုပ်ဆောင်ပေးရမလဲ?' စကားတောင်မှားသေးတယ်။
'Um, ညီ tattoo တစ်ခုလောက်ထိုးမလားလို့၊ ညီဆိုလိုတာက tattoo တစ်ခုလောက် ထိုးထားချင်လို့။ ဟုတ်တယ်...အခုပဲထိုးမယ်ဗျာ' ကောင်လေးစကားတွေတောင် ထစ်လို့ပါပဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေတာလား ကြောက်နေတာလားမသိ။ သူ tattoo တစ်ခုလောက် ထိုးဖို့ကြိုးစား နေဆဲဆိုတာ ကျွန်တော်သဘောပေါက်ရပါတယ်။
'မင်း ကံကောင်းတာဗျ၊ အစ်ကို့ ဧည့်သည်သိပ်မကျခင် ကူပြီးစဉ်းစားပေးနိုင်တာပေါ့ ဒီဇိုင်းတွေ' ကျွန်တော်ရယ်ရယ်မောမောနှင့် စကား ပြန်ပြောပေးလိုက်တယ်။ 'ညီ့စိတ်ထဲ ဘာပုံစံကို ထိုးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားလဲ?' ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို စူပြီး နံရံ ကပုံတွေကို လိုက်စူးစမ်းနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ သိတာပေါ့ ဒီကောင်လေးကို ခပ်စူးစူးနာကျင်မှုမဖြစ်စေ မဲ့ အပ်တုန်းတုန်းတစ်ချောင်းနဲ့ မင်အရောင်ခြယ်ပေးချင်နေတာ။ အဲဒီ အပ်တုန်းတုန်းက ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းရဲ့ဇစ်တွေကို ရုန်းကန်နေတာ ဗျ။
'အရမ်းမကြီးတာ၊ ပြီးတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်ထိုးတဲ့သူအတွက် သင့်တော်တာလေး' လို့ပြန်ဖြေသံက သွားကြားထဲလေတိုးတာကျနေ တာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီဇစ်ကို သွားနဲ့ ကိုက်ပြီးဖွင့်ပေးတုန်း စကားပြောတဲ့ မိုးဇေရဲ့ အသံနှင့်ခပ်ဆင်ဆင်။ အင်း.... ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ သောင်းကျန်းနေတာတွေကို မရိုးမရွဖြစ်အောင်လုပ်နေပြန်ပါပြီ။
'အား...အပျိုစင်လေးလို....အု' ကျွန်တော် သီချင်းသံစဉ်နှင့် ဟာသနှောလိုက်ပါတယ်။ သူ့ပါးပြင်တလျှောက်ရဲရဲနီဖြစ်သွားပါရော။ tattoo ထိုးတာကို ဦးဆုံးပြုလုပ်ဖူးတာမဟုတ်ဘဲ တခြားအရာတွေကိုလည်း မစမ်းသပ်မလုပ်ဆောင်ဘူးသေးဘူးဆိုတာ ပြောဆိုနေသလိုပါပဲ။ လည်ချောင်းရှင်းအောင် တစ်ချက်ဟန့်လိုက်ရင်း စကားဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်လမ်းကြောင်းထဲ သူမျောလာမယ်မျှော်လင့် တာပေါ့။ 'အိုကေ ဘယ်ဒီဇိုင်းပုံ မင်းဆွဲမလဲ? ဘာနဲ့နွယ်တဲ့ဟန်ကိုကြိုက်?' ကျွန်တော်ရပ်နေတဲ့ နောက်ဖက်စင်ပေါ်က ဒီဇိုင်း catalog တစ်ခုနှင့် ကောင်တာမှာ လောလောဆယ် ဖွင့်ကြည့်နေတဲ့စာအုပ် သူ့ကိုလှမ်းပေးလိုက်ရင်း 'အစ်ကို့နာမည်ကျော်ကျော်ပါ စကားမစပ်' အပြုံးနှင့် နှုတ်ဆက်စကားပြောလိုက်တယ်။ လှမ်းလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်လက်ကို သူပြန်လည်ဆွဲကိုင်ရင်း အပြုံးတစ်ဝက်နှင့် ပြန်ပြုံးပြတယ် သူက 'သုတ' တဲ့။ သူ့မျက်လုံးတွေ ကျွန်တော့်လက်ဖျံနှင့် လက်မောင်းတွေကို ငမ်းရင်း ကျွန်တော့်လက်ကိုင်ဆွဲထားတာကို သူပိုမိုဖျစ် ည္ဓစ်ပါ၏။ '၀ိုး....အစ်ကို့ tattoo တွေက သောက်ရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ'
ကျွန်တော် ပခုံးတွန့်မိပါရဲ့။ လူတော်တော်များများ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က ဆေးမှင်ပုံတွေကို သူတို့ကြည့်ပြီး ချီးကျူးနေကျဆိုတော့ မထူးဆန်းသလိုပဲ။ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တစ်ဝိုက်နဲ့ ကျောပြင်မှာလည်း ထိုးထားတယ်။ ပြီးတော့ ခြေထောက်တွေမှာလည်း နည်းနည်းရှိ သေးတာ။ စကားတွေပြောရင်း အလုပ်အကိုင်ဘက်စိတ်ရောက်သွားတာနဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီဂွကြားက ငပဲက အပြင်ကိုခုန်ထွက်ဖို့ မကြိုး စားတော့တာကြောင့် ငွေလက်ခံကောင်တာကနေ နေရာရွှေ့လိုက်ပါတယ် နည်းနည်း။
'ညီ ဒီပုံလေးကြိုက်တယ်' ခပ်သေးသေး မီးတောက်ပုံသဏ္ဌာန်ကောက်ကြောင်းပုံလေးကို သူ့လက်ညှိုးနှင့်ထိုးပြတယ်။ အကောင်းဆုံးရွေး ချယ်မှုတစ်ခုပါပဲ အခုမှစပြီး tattoo ထိုးမယ့်သူအတွက်ပေါ့။ လွယ်ကူတဲ့လိုင်းလေးတွေနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော သေးငယ်သည့်ပုံရိပ်။ ကျွန်တော့်အတွက် တရေးအိပ်လောက်ပဲရှိတာ။
'Great! စလိုက်ကြစို့ ဘော်ဒါလေး' ပြောနေတဲ့စကားကို ကျွန်တော်လက်စသပ်ပြီး ကောင်တာအနောက်ဘက်ကနေ သူ့ဆီလှမ်းသွား လိုက်တယ်။ ခပ်ကြပ်ကြပ် ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံကို အာရုံပြုမိပြီး ကြောက်လန့်သွားမှာလည်း စိုးမိပါရဲ့။ ထင်တဲ့အတိုင်း ကောင်လေးမျက်ဝန်းတွေဟာ မျက်တောင်ခတ်သလားမသိ။
ကောင်ကလေး ပါးပြင်ဟာ ရဲရဲနီလာပေမဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေက ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံကနေရာ မရွေးပါဘူး။ ဒီကောင်လေး ကျွန်တော့် ကိုယ် ခန္ဓာပေါ်က ထိုးထားတဲ့ tattoo ရုပ်လေးတွေအတိုင်း သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ် ဖြစ်နေပြီဆိုတာ လောင်းတောင်လောင်းရဲပါ တယ်။ ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းကိုအကုန်ချွတ်ပြီးတော့တောင်ပြလိုက်ချင်သား။ ဒီကောင်လေးက တော်တော့်ကို ညှို့အားကောင်းသလို ကျွန်တော်က ပျင်းရိပြီး ဆာလောင်နေသူဆိုတော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပေါင်းစည်းခြင်းတစ်ခုပါ။
အသုံးမကျတဲ့ အတွေးတွေသွားလိုက်စမ်းကွာ။ မင်းဟာ professional တစ်ယောက်...ဟုတ်တယ် အဲဒီအတိုင်း ပြုမူရမယ်။ ကျွန်တော် သက်ပြင်းချလိုက်ကာ သူ့ကို အလုပ်လုပ်ရာအခန်းနေရာသို့ ခေါ်ဆောင်သွားလိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်ခန်းရဲ့ ကန့်ထားတဲ့အခန်းငယ်တစ်ခု ပါပဲ။ သူ့ကို ကျွန်တော့်ကုလားထိုင်ပေါ်ထိုင်ဖို့ပြောလိုက်ရင်းမှ ဆိုင်ရှေ့ပြန်သွားကာ ရှေ့တံခါးမကြီးကို သော့ခတ်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်ကလေးကို ဆေးမှင်သွင်းနေတုန်း မရပ်တန့်လိုက်ချင်ဘူးလေ။ တစ်ယောက်ယောက် ၀င်လာနိုင်တယ် မဟုတ်လား။
'အိုကေ အခုဘယ်နေရာလေးကို စထိုးကြမလဲ?' သူရွေးချယ်ထားတဲ့ ပုံကောက်ကြောင်းဆွဲထားတဲ့ ဖယောင်းစက္ကူကို လက်မှာကိုင်ရင်း မေးလိုက်တယ်။ ကောင်ကလေး ရှက်သွေးဖျန်းပြန်တယ်။ ခက်တော့ခက်နေပါပြီ ကျောင်းကပွဲစင်မြင့်ထက် တက်ရတော့မမယ့် အပျိုစင် လေး ရှက်သွေးဖြန်းနေသလိုပါပဲ။ ဒီကောင်လေး
'အဲဒီ့ပုံလေးကို ပြောပြလို့မရတဲ့နေရာလေးမှာ ထိုးချင်တာ' သူတိုးတိုးငြင်သာဆိုတယ်။ 'အရေးတကြီး ထိုးသွားချင်လို့သာဗျ' ထူအမ်း အမ်း သူ့အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်လိုက်တာများ ရင်ထဲတောင်ဆိမ့်တယ် အရသာ။
လုံးလုံးရှည်ရှည် သူ့လက်ချောင်းများဟာ သူ့ cargo ဘောင်းဘီတိုရဲ့ ခါးနေရာဆီလျှောချပြီးသကာလ ကြယ်သီးတွေဖြုတ်၊ ဇစ်ကိုမြန်မြန် ဖွင့်ရင်း သူကြောက်လန့်မှုကို အချိန်မယူတော့ဘဲ တင်းရင်းပြီး မို့နေတဲ့ တင်သားဆိုင်နှစ်ဖက်ကို ဖော်ကာ ညာဘက်တင်းပါးပြင်ကို ညွှန်း ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော် ခေါင်းငြိမ့်ပြပြီး အကြည့်ရောက်ချိန်မှာတော့ ခဏတာမျှ စကားမဆိုနိုင်တော့ပါဘူး။ သူ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ၀တ်မထားဘူးဆိုတော့ ရှေ့ဖက်ပိုင်းဆီးစပ်က အမွှေးကောက်ကောက်လေးတွေကိုလည်း ထွက်ပြူနေတာ မြင်ရပါတယ်။
'မင်းက ဘောင်းဘီကို ဇစ်ဖွင့်ပြီးကိုင်ထားတော့ အစ်ကို အလုပ်လုပ်လို့ အဆင်မပြေဘူးပေါ့'
ကောင်လေးမျက်လုံးက ခဏတာတော့ နည်းနည်းပြူးသွားတယ်။ ပြီးတော့လည်း သူခေါင်းငြိမ့်ပြပါရဲ့။ ဘောင်းဘီကို ခါးဆီနည်းနည်း ဆွဲတင်ပြီးနောက်အောက်ကို လျှောချလိုက်တယ် ခြေချင်းဝတ်ထိပေါ့။
'အိုးမိုင်ဂေါ့' ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားကို မကောင်းဆိုးရွား monster ကြီးလို့ပြောခဲ့တာမှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါ အခု သုတ ရဲ့ ပစ္စည်းကိုမြင်လိုက်ရတော့ ချဲ့ကားပြောလွန်းတဲ့စကားဖြစ်သွားရရော။ သူ့ပေါင်တံနှစ်ခုကြားမှာ တွဲလျားကျနေတဲ့ ငပဲဟာ ရှည်ပြီးတုတ် လေတဲ့ ၀က်အူချောင်းကြီးပါပဲ။ ၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုထဲမှာ အဆင်ပြေပြေနှင့် ဘယ်လိုများထည့်ပြီးဝတ်ထားဘာလိမ့် ဒီကောင်လေး နှယ်။ သူ့ဟာကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်ငပဲဟာလည်း ဘောင်းဘီထဲမှာ twist အကကစပြုလာပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ သတိလက်လွတ် ငေးမောမှုကြောင့် သုတရဲ့ပါးပြင်ဟာ ရဲရဲတောက်ဖြစ်လာသလို ရုတ်တရက်ဆိုသလို သူ့ငပဲကြီးဟာခေါင်း တရမ်းရမ်းနဲ့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းထဲမှာ မာတောင့်လာပါရော။
'sorry....sorry အစ်ကို' သုတတစ်ယောက် သူ့ဘောင်းဘီကို ဆွဲတင်ပြီး ၀တ်လိုက်တယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေဟာ ရှက်ရွံ့မှုနှင့်အတူ ကလယ်ကလယ်ပေါ့။ ခပ်ထွားထွား မာကျောတောင့်တင်းတဲ့ tattoo ထိုးပေးသူရှေ့မှာ ၀တ်လစ်စလစ်ဖြစ်လုနီးပါးနှင့် အလုပ်ခုံပေါ်ထိုင် ရင်း သူ့ပစ္စည်းက မာတောင်လာတာဆိုတော့ ကြောက်လန့်စိတ်ဝင်သွားသလားမသိ။ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပဲ ကျွန်တော့်ဦးနှောက်ဟာ ချင့်ချိန်မှု၊ စဉ်းစားခြင်း၊ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။ အံ့အားသင့်သွားခြင်းလည်း ပါတာပေါ့။
'ပြန်မ၀တ်ပါနဲ့ကွာ' ကျွန်တော် နုညံ့စွာပြုံးပြရင်း ခပ်တိုးတိုး သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်။ 'ဒီကိစ္စကို tattoo မထိုးခင်ကိုယ်တို့တွေသေချာ ဂရုစိုက် ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ထင်တယ်' ကျွန်တော်ပခုံးတွန့်ကာ ပါးချိုင့်ပေါ်အောင်ပြုံးရယ်ရင်း ဆက်ပြောရတာပေါ့လေ။
'သက်သောင့်သက်သာဖြစ်မနေဘူး၊ စိတ်အိုက်နေတာမျိုး ဖြစ်နေရင် နာကျင်တာကိုပဲအာရုံရောက်ပြီး အလုပ်တွင်ကျယ်မှာမဟုတ်ဘူးကွ'
'ဒါပေမဲ့ but ဆိုတော့ but...butt? နောက်မှကွာ အခုတော့ အစ်ကို့ပါးစပ်ကိုပဲ သုံးသင့်တယ်ထင်တယ်' ကျွန်တော် သူပြောမယ့်စကားကို ကြားဖြတ်လိုက်ကာ သူအရှက်သည်းငြင်းဆန်မဲ့စကားလုံးတွေကို ရပ်တန့်စေလိုက်ပါတယ်။ ပန်းပုထုထားသည့်အလား ကြွက်သား အမြှောင်းတွေနှင့် ပြည့်နေတဲ့ သူ့ပေါင်တံပေါ် လက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းတင်လိုက်ကာ အသာအယာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခြင်းစီ ပွတ်သပ် ကြည့်တယ်။ သူ့ရင်အုပ်တွေဆီ ကျွန်တော့်လက်အစုံ အသာအယာရောက်ရှိသွားချိန်မှာတော့ သူ့နှလုံးခုန်သံဟာ ဗုံသံတစ်ခုအလားပါပဲ။ ချောမွေ့တဲ့ သူ့ဗိုက်သားပြင်က တစ်ဆင့်ပေါင်ခြံဆီရွေ့တော့ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေဟာ ဆီးစပ်က ခြုံပုတ်ငယ်ကို ထိုးဖွမိရပါသေး တယ်။ ခပ်တိုးတိုးနှင့် နုညံ့တဲ့ ညည်းညူမိန်းမောသံကို ကြားရတော့ ခပ်ကဲကဲ ကစားနေတဲ့ တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် သူ့ငပဲကို လက်အစုံနှင့် ကိုင်လွယ်လိုက်ပါတယ်။
လက်ဖ၀ါးအစုံနှင့် အုပ်ပြီးကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်တာဆိုတော့ ချစ်စရာပစ္စည်းကြီးရဲ့ ပူနွေးမှုဟာ ကျွန်တော့်လက်ဖ၀ါးပြင်တွေမှာ ခံစားရပါရဲ့။ ကျွန်တော့်အထိအတွေ့အကိုင်အတွယ်များကြောင့်ထင့် သုတရဲ့ငပဲပစ္စည်းထိပ်က သဘာဝအရည်ကြည်တွေဟာ စိမ့်ထွက်လာပါရော။ ဒီလို အရည်ကြည်တွေများရင် ဆုံးခန်းတိုင်ဖို့ သိပ်မကြာတော့ဘူး။ သိပ်မရှည်ကြာတော့ပါဘူးလေ။ ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ဖြင့် ငုံစုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတာကြောင့် အရင်းကိုထိန်းကိုင်လိုက်ပါတယ်။ ခပ်မတ်မတ်ဖြစ်နေတဲ့ ငပဲရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်း တစ်ဝိုက် လျှာဖျားနှင့် ရစ်ဝိုက်ကစားကာ ပါးစပ်ထဲအထုတ်အသွင်း စလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ သူ့ပစ္စည်းတစ်ခုလုံး ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကို ကျယ် နိုင်သမျှ ကျယ်အောင်ကြိုးစားရင်း မျိုချပါတယ်။ အကုန်လုံးမျိုချဖို့ဆိုတာဖြစ်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။
လုံလောက်ပြီထင်တော့မှ ဟထားတဲ့ပါးစပ်ကို ကွမ်းသီးခေါင်းထိပြန်ရောက်အောင်လုပ်ဆောင်ကာ နုညံ့သောအရေပြား၊ အသားဆိုင်လေး တွေကို သွားဖြင့်မနာအောင်ခြစ်ပြုရင်းပေါ့နော်။ သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းနဲ့ကပ်နေတဲ့ အရေပြားကိုရော မေးသိုင်းကြိုးကိုရော လျှာဖျားလေးဖြင့် ရစ်ကာဝိုက်တာလည်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေဖြင့် တစ်ဝက်လောက်ထိ ငုံကာ ကစားရင်း အသွင်းအထုတ်လည်းလုပ်ရတာပေါ့။ တစ်ခါတလေ သူ့ခါးကို လှုပ်လိုက်တာကြောင့် တစ်ချောင်းလုံးလည်မျိုထဲထိတောင် ရောက်ရသေးတယ်။
သူအရသာတွေ့သွားပြီ ထင်တာပဲ။ သူ့တင်ပါးတွေကို အားပြုပြီးကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲရောက်နိုင်သမျှ အတွင်းကျကျ ထည့်တယ်။ သူ့ငပဲ ကိုကိုင်ပြီးအလုပ်များနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေကို သူ့လက်ဖြင့် ထိန်းကိုင်ဖယ်ရှားပြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်တာ အသက်ရှူတောင်မှား ရတယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းက ထွက်လာတဲ့ မိန်းမောသံကျယ်ကျယ်ကိုလည်း ကျွန်တော်ကြိုက်မိပါရဲ့။ 'အိုး...ရှီး...အွမ်း...good!' ဆိုတာနဲ့ အငမ်းမရ သူ့ငပဲကိုစုပ်မှုတ်နေတဲ့ ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းကထွက်နေတဲ့ အသံများဟာ သံစဉ်အတက်အကျဖြစ်နေတဲ့ သံစုံတီးဝိုင်းကြီးက အသံတွေအလားပါပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ငပဲကိုလည်း ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့်ကာ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရပါတယ်။
သူမကြာခင် ဆုံးခန်းတိုင်တော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိလာပြီ။ ကျွန်တော့်အလှည့်ဆိုတာဖြစ်လာမှ မဟုတ်ဘူး ဒီအခြေအနေအတိုင်းဆို။ ဒီကောင်လေးရဲ့ ခပ်ကြပ်ကြပ် ခရေ၀ထဲ တစ်လျော့လောက် ပန်းထည့်ခွင့်မရခင် ပြီးဆုံးသွားနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်သူ့ငပဲကိုလွှတ်လိုက်ပြီး ကျယ်လောင်နေတဲ့ သူ့အော်သံကို လျော့သွားစေခြင်းငှာ ဆုံလည်ခုတင်ပေါ်လှဲစေတာပေါ့။ အလုပ်လုပ်ရာနေရာလေးဆိုတော့ ပစ္စည်း ကိရိယာတွေထည့်ထားတဲ့ အံဆွဲပါတဲ့ဘီရိုတွေရှိနေပါတယ်။
အံဆွဲတစ်ခုကိုဖွင့် မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို အရူးတစ်ယောက်လို ဖယ်ရှားပြီးတခြားသော အလွတ်ထဲ တစ်ခုခြင်းဆိုသလို ကြည့်ပြီး ပစ် ထည့်နေမိပါရော။ ဂွမ်းလုံးတွေ၊ အရက်ပျံဓာတ်ပါတဲ့ ဂွမ်းဖတ်ထုပ်၊ Q-tips (နားကျပ်ဖို့ ဂွမ်းတံလေးတွေ)၊ Lifesavers တံဆိပ်ငုံဆေး ကွင်းလိပ်လေးတစ်ဝက်၊ နောက်ဆုံးတော့ ခဲရောင်ကာဗာနဲ့ condom တွေရယ်။ ချောဆီ tube ဘူးတစ်ခုရယ်တွေ့တော့တယ်။ ဟူး... တော်ပါသေးရဲ့ ဒီကောင်လေးလို အထူးစပါယ်ရှယ် ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကို 3-in-1 အဆီနှင့် အသုံးမပြုချင်တာမို့ အသည်းအသန်ရှာမိခြင်းပါ။
သူ့လက်တွေ ဒူးတွေကို အလိုက်သင့်ဖြေလျော့လှဲလျောင်းနေစေရင်း သူ့ကြောက်လန့်မှုကို မရှိတော့အောင် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပွတ်သပ် နှိုးဆွပေးရသေးတယ်။ အတွင်းကျကျ သူ့ခရေ၀ကိုလည်း မသိမသာကလိတာပေါ့နော်။
ပေါင်လေးကို ကားပေးလာတော့ ဖင်ကိုကြွကာ ခရေ၀ကိုပေါ်လာစေရင်း ကျွန်တော့်လျှာကို အပြားလိုက်ကပ်ကာ လျက်ပြုရင်း တစ်ခါတစ်ခါ လျှာအချွန်လေးဖြင့် ထိုးထိုးဆွရတာပေါ့။ သူ့ပါးစပ်က ညည်းညူမိန်းမောသံပြန်ပေါ်လာသလို တင်ပါးတွေကလည်း တဆတ်ဆတ်ခါလို့။ ချောဆီဘူးမှ ပမာဏနည်းနည်းညှစ်ယူလိုက်ကာ ကျွန်တော့်လက်ခလယ်မှာ ရွှဲရွှဲလေးဆွတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပန်းသွေးရောင်ထနေတဲ့ သူ့တင်ပါးတစ်ဖက်ကို အသာဖြဲကိုင်ကာ ခရေ၀ထဲကို လက်ဆစ်တစ်ခုခြင်းဖိထည့်လိုက်ပါရော။ သူ့ပါးစပ်က အလန့်တကြားတားမြစ်သံကို လျစ်လျူရှုလိုက်ပါရဲ့။ God, သူ့ဟာကလည်းကြပ်လိုက်တာ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းကသွေးကြောတွေ ကိုတောင်ဖြတ်ပစ်နိုင်တယ်။ ခပ်ဖြေးဖြေးလေးအသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်း ကစားလိုက်ပါတယ်။ တစ်မိနစ်ထက်မနည်း တကယ့်ကို ဂရု တစိုက် နူးနှပ်ပြီး ပြင်ဆင်တာအကျိုးထူးမှာပါ။ နုညံ့ပြီးသစ်လွင်တဲ့ကောင်လေးရဲ့ အသားဆိုင်တွေကိုထိတွေ့နေရသလို ခပ်ကြပ်ကြပ် ခရေ၀လေးကိုပွတ်သပ်နှိုက်ပြုရတာ ကျွန်တော့်ငပဲကို အစွမ်းကုန်အလိုလိုမာတောင်နေစေကာ ၉၀ဒဂရီ။
ကျွန်တော့်လက်ချောင်းကို ဟိုသည်လှည့်ကာ သူ့ prostate ကို ကလိရင်း ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကတော့ နုညံ့တဲ့တင်ပါးပြင်တွေကို ပွတ်သပ် ကိုက်ဆွဲဟန်လုပ်မိသေးတယ်။ သုတ သူ့ငပဲသူကိုင်ကာ -ွင်းထုတော့တာပေါ့ ကျွန်တော့်နှိုးဆွမှုမှာ မတင်းနိုင်တော့ဘူးထင့်။ ခဏနေက တော့ ကျွန်တော်ပြုသမျှ ငြိမ်သက်မိန်းမောနေပြီး အခုတော့ တက်ကြွမာန်ပါလာပြန်ပေါ့။
လက်ခလယ်နှင့်မွှေတာ အဆင်ပြေနေတော့ ကျွန်တော့်လက်ခလယ်ကို မသိမသာထပ်သွင်းပြီးနှဲ့ပြုလိုက်တာမှာ သူ့နှုတ်ခမ်းက အလန့် တကြားသံထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်။ သူ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားချောင်းရင်းစောင့်ကြည့်ဖြစ်ရတာပေါ့ ခပ်ထွားထွားသူ့ငပဲကို ကိုင်ရင်း အားရပါးရ-ု နေတာကိုလေ။ ခဏနေတော့ သူ့ငပဲကိုစုပ်မှုတ်ပေးခဲ့တာ အခုတော့ သူ့အားသူကိုးပြီ။
ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကိုဖယ် ချောဆီရွှဲစိုနေအောင်သုတ်လိမ်းထားတဲ့ စွပ်ထားသောငပဲကြီးကို အစားသွင်းလိုက်ပါတယ်။ သူ့ခရေ တွင်းဟာ ပူနွေးနေပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကို ကြပ်နေအောင် ဖျစ်ညှစ်ထားတာများ တရားခံကိုလွတ်သွားမှာစိုးရိမ်ပြီး လက်ထိပ်ခတ်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ထိပ်ပိုင်းလေးကိုအသွင်းအထုတ်လုပ်နေရာက အဆုံးထိဖိသွင်း လိုက်ပါတယ်။ အိုကေ...ကျွန်တော် သေသွားနိုင်တယ်... ပျော်ရွှင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် အခုပဲသေသွားမှာ
ကောင်းမွန်လှတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ မျောနေတာ အသက်ရှူနေဆဲ၊ပြီးတော့ ကောင်းလှတဲ့ ခရေ၀ကြွက်သားတွေထဲငပဲကို ခပ်သွက်သွက် အထုတ် အသွင်းလုပ်ကာ ရွှေဥတွေကို တဖြန်းဖြန်းရိုက်တဲ့အထိ လုပ်နေဆဲဆိုတာ အတော်ကြာမှ သတိပြန်ထားမိပါတယ်။ တင်ပါးတွေကို ကျစ် သူ့တင်ပါးနှင့် ကျွန်တော့်ဆီးစပ်ကပ်တဲ့အထိဖိသွင်း၊ ပြီးတော့ပြန်ထုတ် အခါခါ အဲဒီအတိုင်းလုပ်ပစ်တာ။ ဆောင့်ဆောင့်သွင်းလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်အားကြောင့် သူ့တင်ပါးနှင့် ကျွန်တော့်ဆီးစပ်ရိုက်ခတ်မှုမြည်ဟီးသံကအတော်ကျယ်ပါတယ်။ သူ အားရပါးရအော်ကာ အမြှောက်တံက သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်တာလောက်တော့ အားရပါးရမနိုင်ဘူးပေါ့လေ။
ကျွန်တော့်အထင် သူ့ခရေကြွက်သားတွေဟာ စသွင်းကာစကတည်းက ကြပ်လိုက်တာ ဘယ်အရာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြရမှန်းမသိဘူး။ သူ အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်ချိန်မှာဆို တကယ့်ကိုပိုပြီး ညှစ်ပြုတော့တာ။ အရမ်းကိုညှစ်တာ....အရမ်းညှစ်...'အ'..။ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖင်ကြွက်သားမှဟုတ်ရဲ့လား မသိဘူးကြပ်သိပ်လွန်းတယ်။ ဒီတော့....ကျွန်တော်လည်း မြန်မြန်ဆွဲထုတ်ကာ ကိုချွတ်ပြီးအမှိုက်ခြင်းထဲ ထည့်ပစ်လိုက်ပါရဲ့။ ဒီကောင်ကလေး ဘယ်သူများပါလိမ့် 'အာ...အ..အ..ရှီး' ကျွန်တော့်ကိုယ့်ငပဲကို ကိုယ်ကိုင်ပြီး ခပ်သွက်သွက်လေး ကစားလိုက်တာ သူ့ဗိုက်သားပေါ် တစ်ဂါလံလောက်ရှိမယ့် သုတ်ရည်တွေ ချောင်းစီးသွားရော။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေမိကြတယ်။ သက်ပြင်းမောကိုချရင်း လေပူတွေကိုမှုတ်ထုတ်ကာ အသက်ပုံမှန်ရှူဖို့ ကြိုးစားရင်းပေါ့။ 'သုတ' ကျွန်တော့်အလုပ်စားပွဲပေါ် မျက်နှာအပ်မှောက်လိုက်ပါရဲ့ သူ့ဗိုက်သားပေါ် သုတ်ရည်တွေရွှဲနေအောင် ပန်းထားတာကို စိတ်မဆိုးဘဲ။
'ညီ....အခု relax ဖြစ်သွားပြီလို့ ခံစားရတယ်ဗျ' သူခပ်တိုးတိုးပြောတဲ့စကားသံဟာ ခုံကာဗာ သားရေစနှင့် ထိကပ်ပြီးမှ ထွက်လာသလိုပဲ။ 'Really relaxed, Really, Really relaxed, Really, Really, Really' 'အိုကေ..သဘောပေါက်ပြီ' ကျွန်တော်စကားကို ကြားဖြတ်ပြော လိုက်တယ်။ 'မင်းသက်သောင့်သက်သာဖြစ်သွားပြီ။ ဒီတော့ tattoo ထိုးဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီပေါ့အခု' အမေးစကားပြောလိုက်ရင်း သူ့တင်ပါး တစ်ဖက် ကို ရိုက်ခတ်ကစားလိုက်ရော။ အလုပ်ခွင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့အသင့်ပေါ့။ ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာတော့ ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးစဲသွားပါပြီ။ လာနေ ကြဖောက်သည်အချို့ဆိုင်ရှေ့မှန်တံခါးကိုလာမခေါက်မှီ ဒီကောင်လေးကိစ္စ အပြီးသတ်ဖို့လိုတယ်။
သုတ အတော်တော့ ၀ါသနာပါသူပဲ။ တွေကိုကောင်းကောင်းထိုးချင်တာ။ သူလာနေကျပုံစံအဖြစ်အချိန်တစ်ခုကို သတ်မှတ်လို့ရအောင် ကို အကြိမ်များစွာ ကျွန်တော့်ဆီပြန်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခုသူ့ပခုံးတလျှောက် ကနုတ်တွေဆွဲနေပါပြီ။ သူ့ကိုဆေးမှင်ချယ်ခွင့် ပေးတာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းကိုပါ။ ဆိုင်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲရှိနေချိန်များမှာ သူအမြဲလိုလိုရောက်လာတတ်တယ်။ အဲဒါမိုးစက်တွေမြေကြီးပေါ် စတင်ခုန်ပေါက်တဲ့အချိန်တိုင်းလိုလိုပေါ့။ ပြီးတော့ သူအမြဲလိုအပ်နေတာက ပထမဆုံး သက်သောင့် သက်သာဖြစ်ဖို့။
Alex Aung (13 May 2011)